CREATiVE Web Studio မှ သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် - Web Essential (1) ဦး
- Web Advanced (1) ဦး
- PHP Course (1) ဦး MORE�
Information of Business Management Diploma Courses (ABE)
KMD Computer Centre မှဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာတစ်ခုဇြစ်သော Association of Business Executives(ABE) မှ Diploma သင်တန်းများ၊ Higher Diploma သင်တန်းများ၊ Graduate Diploma သင်တန်းများကို June 2013 Exam အတွက် December ဒုတိယပတ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် ပါမည်။
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး (၄၀%) ပေးအပ်မည့် University of Chester University of Chester သည် ၁၈၃၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး Chester Campus နှင့် Warrington Campus ဟူ၍ကျောင်းပရ၀ဏ် နှစ်ခုရှိကာ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အမေရိကန်၊ သြစတြေးလျ ၊တရုတ်နိုင်ငံ အစရှိသည့် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားပေါင်း (၁၆၀၀၀) ကျော်ပညာသင်ကြားနေသည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအပြင်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက်....
~~ Victoria University College ~~
၂ဝ၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက်နေ့တွင် Victoria University College ဖွင့်လှစ်မည့်အကြောင်းကို စာနယ်ဇင်းများကိုဖိတ်ကြားပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ Victoria University College ကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးတိုးတက်မှုအတွက် Victoria University College ၏တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုတင်ပြရန်အတွက် ....
Australia နိုင်ငံ Ballarat University ၏ MBA Scholarship ကို SR မှတဆင့် လျှောက်ထားနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Master of Business Administration (MBA) ဘွဲ့ကိုရယူလိုသောကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ အနေဖြင့်စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ NIM (Nanyang Institute of Management) နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော University of Ballarat (Australia) မှ MBA ပညာရပ်ကို တက်ရောက် သင်ကြားလိုသော ကျောင်းသား/ကျောင်း သူများအတွက်အထူး အစီစဉ် Scholarship ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းပညာသင်ဆု အတွက် S$3000 ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Nanyang Institute of Management တွင် ပညာသင်ကြားရမည်....
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ဂျပန်နိုငံ APU တက္ကသိုလ်မှ 100% Full Scholarship ပေးအပ်မည်
ဂျပန်နိုင်ငံ Asia Pacific University (APU) မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများအတွက် 100% Full Scholarship ပေးအပ်မည့် အကြောင်း နှင့် လျှောက်ထားနိုင်မည့်ဘာသာရပ်များ၊ ဝင်ခွင့်အချက်အလက်များ အကြောင်းကို နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့ အချိန် 10:00 am to 12:00 noon, Park Royal Hotel ၊ ပတ္တမြားခန်းမ (၄) ၊ ၌ ယင်း APU ကျောင်းမှတာဝန်ရှိသူများကိုယ်တိုင် လာရောက်ရှင်းလင်းပြောကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း....
နယူးဇီလန်နာမည်ကျော်တက္ကသိုလ်များဝင်ခွင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြမည်၊၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှ နာမည်ကျော်တက္ကသိုလ်ကြီးများဖြစ်သော University of Auckland, Massey University နှင့် AUT University များသို့ ဝင်ခွင့်အတွက်၊ လိုအပ် သည့်ပြင် ဆင်မှု့ များ၊ သင်ယူနိုင်သည့်ဘာသာရပ်များအကြောင်းနှင့် အလုပ် အကိုင်အခွင့် အလမ်းများအကြောင်း ကိုအောက်တိုဘာလ (၂၇)ရက်၊ Summit Parkview Hotel တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Singapore-UK-Australia-New Zealand ပညာရေးပြပွဲတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်ရှင်းလင်းပြောကြားပေးမည်ဖြစ်
ကြောင်း အဆိုပါပညာရေးပြပွဲကိုစီစဉ်သည့် CROWN Education မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ပြောကြား....
ကနေဒါနိုင်ငံတွင် လက်တွေ့(၆)လလုပ်ကိုင်နိုင်မည့် Master of Arts in Tourism Management အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ . ကျောင်းသားများကိုစတင်ခေါ်ယူ
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားသောမြန်မာကျောင်းသားများအတွက် MA in Tourism Management ဘာသာရပ် ကိုကနေဒါရှိ Royal Roads University တွင်သင်ယူနိုင်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ MA Tourism Management ဘာသာရပ်အတွက် စာသင်ချိန် ၁၂ လ နှင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံရယူ လိုသူများအတွက်Internshipအစီအစဉ် ၆ လကိုရွေးချယ်နိုင်ကြောင်း ကျောင်းဝင်ခွင့်နှင့် ဗီဇာလျှောက်ထား ခြင်းများကို October 27, 2012 တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပညာရေးပြပွဲတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း ၀န်ဆောင်မှု့ ပေးမည့် ....
Dimension International College တွင် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းခွင်အထူးပြုဘာသာရပ်များနှင့် အခြားဘာသာရပ်များကိုဈေးသက်သက်သာသာနှင့် အချိန်တိုအတွင်းတက်ရောက်နိုင်အောင်မြန်မာရုံးခွဲမှစတင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေ.....
S'pore နိုင်ငံတွင် Dimension International College သည် Hotel လုပ်ငန်း ခွင်ဘာသာရပ်များကိုအထူးပြုသင်ကြားပေးလျှက်ရှိသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ ....
�Singapore-UK-Australia-New Zealand ပညာရေးပြပွဲကျင်းပမည်� CROWN Education မှကြီးမှုး၍ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ EduTrust လက်မှတ်ရကျောင်းများ၊ အင်္ဂလန်၊ သြစတြေလျ၊ နုယူဇီလန် ကျောင်းများပါဝင်ပြသမည့် နိုင်ငံတကာပညာရေးပြပွဲကို အောက်တိုဘာ (၂ရ)ရက်၊ စနေနေ့ ၊ နံနက် (၁၀)နာရီမှ မွန်းလွဲ (၂)နာရီအထိ၊ အလုံလမ်းရှိ Summit Parkview Hotel တွင် ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ....
Singapore နိုင်ငံရှိ PSB Academy မှ စစ်ဆေးမည့် English Placement Test ကို Study Abroad ရုံးခန်းတွင် ဖြေဆိုနိုင်တော့မည် Singapore နိုင်ငံရှိ PSB Academy တွင် တက်ရောက်လိုသည့် ကျောင်း သား သူများအတွက် English လိုအပ်ချက် IELTS (သို့) TOEFL မရှိသေး ပါက ကျောင်း၏ English Placement Test အား Study Abroad ရုံးခန်း တွင် ဖြေဆိုနိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ အဆိုပါ Test ကို ဖြေဆိုပြီးပါက....
PSB Academy ၏ Engineering Diploma ကိုတက်ရောက်မည့်သူများအတွက် Study Grants ပေးရန် Interview Sessions ပြုလုပ်ပေးသွားမည်။
PSB Academy ၏ Engineering Diploma ကိုတက်ရောက်လိုသူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Study Grants ချီးမြှင့်ပေးနိုင်ရန် Interview Session ကျင်းပပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါအပ် ပါသည်။ အဆိုပါ Interview Session အတွက် PSB နှင့် UON Engineering programs တို့၏ .....
Professional Certificate in Marketing Management Course ကို YCTC (Yangon Consultancy & Training Centre) ၌ ၄ ပတ် သင်တန်းကို ရုံးချိန်လွတ် ဖွင့်မည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ဈေးကွက်အတွင်း မိမိကုန်စည်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ ခိုင်မာစွာရပ်တည်နိုင်ရန် နှင့် ပြိုင်ဘက်ကုန်စည်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အတွက် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင် စီမံခန့်ခွဲ ခြင်း သည် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်နေသည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြ ရမည့် .....
ပြောင်းလဲလိုက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အိုင်တီ ၊ အင်ဂျင်နီယာပညာရေးလမ်းကြောင်းများ နှင့် ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာပညာရေးလမ်းကြောင်းများအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် အင်ဂျင်နီယာဘာသာ ရပ်များ သင်ကြား ပို့ ချပေး မည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်များ၏ ပညာရေး လမ်းကြောင်း များကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု့ များပြုလုပ်တော့ မည်ဖြစ်ပါသည်၊၊ သို့ ဖြစ် ပါ၍ အဆိုပါပညာရေးလမ်းကြောင်းများကို ရှင်းလင်းစွာ သဘောပေါက် စေရန်.....
PSB Academy မှ Engineering ဒီပလိုမာ အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေအပ်မည်
စင်ကာပူ PSB Academy ၏ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ intake တွင် Diploma in Electrical Engineering နှင့် Diploma in Mechanical Engineering လျှောက်ထားသူများအတွက် Study Grant စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ မှ ၃,၀၀၀ အထိလျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
အင်္ဂလန်အခြေစိုက် Globe Education Consultancy နှင့် CROWN Education တို့ ၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မူ့ ဖြင့်၊မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသူ
ကျောင်းသားများကို MBA, BA, Degree Foundation ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအတွက်လာရောက်ရွေးချယ်မည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Globe Education Consultancy နှင့် CROWN Education တို့ ၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု့ ဖြင့် အင်္ဂလန်တွင် MBA, BA, Degree Foundation ပရိုဂရမ်များကို သင်ယူမည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ကုန်ကျစရိတ်စရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ပညာသင် ယူနိုင်ရန် ၀န်ဆောင်မူ့ ပေးမည့်ရှင်းလင်းပွဲကို August 22, 2012 (Wednesday), ညနေ (၃) နာရီမှ (၅) နာရီအထိ Summit Parkview Hotel, Meeting Room တွင် ရှင်းလင်းပြောကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး August 23-24 ရက်များတွင် တစ်ဦးချင်းစီ ဆွေးနွေးပေးမည့်.....
ဗြိတိန်နိုင်ငံ ရှိ Queen's University Belfast ရှိ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၏ တက္ကသိုလ်အတွေ့အကြုံ ရှင်းလင်းတင်ပြပွဲ
Belfast မြို့ ရှိ Queen's တက္ကသိုလ်တွင် လက်ရှိတက်ရောက်နေသော မြန်မာကျောင်းသားများ မှ Queen's University Belfast တွင် တက်ရောက်ရသော အတွေ့အကြုံကို မြန်မာကျောင်းသား၊ မိဘများလေ့လာသိရှိနိုင်ရန်အတွက် Regent ပညာရေးကုမ္ပဏီ (ဘီ- ၁၃+၂၃)၊ ရွှေကိန္ဒရီ အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ၊ နာနတ်တောလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ တွင် လာမည့် စနေနေ့ ၊ သြဂုတ် (၁၈) ရက်၊ ညနေ (၅) နာရီ တွင် ပြောကြားသွားပေးမည်.....
What is Media (Art & Design) Arts & Design ဘာသာရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားတော်တော်များများ နှင့် ကျောင်းသား မိဘအချို့မှာ Fine Arts (သို့မဟုတ်) Crafts နှင့် ဆက်စပ်၍ အထူးပြု သင်ကြားသော ဘာသာရပ်အဖြစ် ထင်မြင်ထားသည်.....
ဆေးပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း၊ မီဒီယာ၊ စီပွားရေးနှင့် စီမံခန့် ခွဲမှု့ ဘာသာရပ်များအတွက် Merit Scholarship
(S$ 10000) ကို MDIS�s Open House တွင်လာရောက် လျှောက်ထားနိုင် စင်ကာပူအစိုးရမှ ပြဌာန်းထားသည့် ပညာရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အရည်အသွေးဆိုင်ရာလက်မှတ် EduTrust (၄)နှစ် ရရှိထားသော Management Development Institute of Singapore (MDIS) မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Open House ကို ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ နေ့လည်(၂)နာရီမှ (၅)နာရီအထိ အလုံလမ်း Summit Parkview Hotel, Ballroomတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ် ကာ.....
အာရှနှင့် သြစတြေလျရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သုတေသန နှင့်ပတ်သက်သည့် ပညာရပ်များနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ အကြောင်း Dr. Mandar Godge (PhD National University of Singapore) မှ ဟောပြောပို့ ချမည်၊၊
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆေးဝါးရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ခြင်းနှင့် သုတေသနလုပ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို စင်္ကာပူနှင့် သြစတြေ လျနုိုင်များတွင်တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်လာလျက်ရှိပြီး၊ အဆိုပါ နယ်ပယ်အသီးသီး အတွက်လိုအပ်လျက်ရှိသောပညာရပ်များနှင့် အလုပ်အကို်င် အခွင့်အလမ်း.....
မယ်ကမ္ဘာရရှိခဲ့သူ Miss Ashwariya Rai ၏ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းဖန်တီးရှင် Ms. Sherna မှ Fashion Industry တွင် အောင်မြင်မှုဆွတ်ခူးနိုင်မည့် တီထွင်ဖန်တီးမှု လမ်းကြောင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဟောပြောပို့ချမည်
ပြောင်းလဲလာသည့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူ ထိပ်တန်း ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း များကို ဖန်တီးလိုသူများအတွက် မယ်ကမ္ဘာMiss Ashwariya Rai ၏ ဒီဇိုင်းဖန်တီး ရှင်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် Summit Parkview Hotel Ballroom တွင် ဇူလိုင် ၂၉ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် ၂နာရီမှ ၃နာရီအထိ.....
Singapore Education Exhibition (SEE) 2012 ကို SR Worldwide Education မှ ကြီးမှူးကျင်းပမည်
Smart Resources Worldwide Educationမှကြီးမှူးကျင်းပပြုလုပ်မည့် Singapore Education Exhibition (SEE) 2012 ကိုJuly လ 21ရက်နေ. နေ.လည်(၁)နာရီမှ (၅)နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို.ရှိ Park Royal Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပညာရေးပြပွဲတွင် စင်္ကာပူနို်င်ငံ၏.....
Pre Master (International College Portsmouth) တွင် တက်ရောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံမှ . ပထမဦးဆုံးပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးရရှိသွားသူ မနွယ်အိညို၏ Student Life အတွေ့အကြုံ.
၁။ ညီမ Pre Master တက်ရောက်ဖို့ပညာသင်ထောက်ပံကြေးဆုရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘယ်ဘာသာနဲ့ရရှိသွား တာလဲ။ Scholarship ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရရှိတာလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ညီမ MA Marketing နဲ့ စကော်လာရှစ် ၂၅% ရရှိခဲ့တာပါ၊၊ ညီမရဲ့IELTS အမှတ်ရယ် နောက် ကျောင်းက Officer နဲ့ အင်တာဗျူးကလည်း အဆင်ပြေပြေ ဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်.....
PGDBA Course, August 2012 Intake အတွက် Study Grant SGD 1000 ပေးအပ်မည် STI Education သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ သင်ကြားရေးကို ပြည်တွင်းရှိ ဆရာ/မများ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီစွာ ရယူနိုင်ရေးအတွက် The Open University of Hong Kong နှင့် School of Education and Languages ပူးပေါင်း၍သင်ကြားရေးဆိုင်ရာဘွဲ့ .....
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Nanyang Institute of Management (NIM)
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Nanyang Institute of Management (NIM) မှ ယခုလာမည့် July လ 21 ရက်နေ့ နေ့လည် (၂)နာရီမှ ညနေ (၅)နာရီအထိ OSM Education Centre နှင့် ပူးပေါင်း၍ ၄င်း OSM စင်တာတွင် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည်ဟု သိရှိရသည်။ အဆိုပါ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွင်.....
STI Education နိုင်ငံ၏ အစိုးရတက္ကသိုလ်မှ တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်မည့် The Open University of Hong Kong သင်တန်း တက်ရောက်နိုင်ပြီ။
School of Business and Administration သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ပညာရေးကို ပြည်တွင်းရှိ ကျောင်းသားများ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီစွာ ရယူနိုင်ရေးအတွက် The Open University of Hong Kong နှင့် School of Business and Administration ပူးပေါင်း၍ MBA ဘွဲ့သင်တန်းကို ၂ဝ၁၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှစ၍ ဖွင့်လှစ် .....
STUDY ABROAD Information Centre မှ Lancaster University တွင်တက်ရောက် လိုသူ ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများ အတွက် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် Scholarship လျှောက်ပေးသွားမည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Lancaster University တွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားလိုသူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် STUDY ABROAD Information Center မှ .....
Spatial Technology လေ့လာသင်ယူနေကြသူများအတွက်
Remote Sensing � Intermediate Level သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည် ယနေ့အချိန်သည် နည်းပညာများ အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းဖြင့် တိုးတက် ထွန်းကား လျက်ရှိသည့် အလျှောက် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ ပြည်သူ့ ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ သဘာဝသယံဇာတ ရှာဖွေ တူးဖေါ်ရေး၊ မြို့ပြတည်ဆောက်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စသည့် နယ်ပယ် အသီးအသီးတွင် .....
Pre-Masters ပညာသင်ဆု ၅၀% ပေးအပ်မည့် စကော့တလန်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် စာရင်းအင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ ပို့ ချရာတွင် UK ထိပ်ဆုံးနံပါတ် (၁၀) စာရင်းဝင် University of Stirling မှ ဘွဲ လွန်သင်တန်းအတွက် အရည်အချင်း ပြည့်မှိသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ပညာသင် ထောက်ပံ့ ကြေး ၅၀% အထိပေးအပ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း .....
Spatial Technology လေ့လာသင်ယူနေကြသူများအတွက် Remote Sensing � Intermediate Level သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
ယနေ့အချိန်သည် နည်းပညာများ အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းဖြင့် တိုးတက်ထွန်းကားလျက်ရှိသည့်အလျှောက် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ သဘာဝသယံဇာတရှာဖွေ တူးဖေါ်ရေး၊ မြို့ပြတည်ဆောက်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစသည့် နယ်ပယ်အသီးအသီးတွင် ၎င်းနည်းပညာများကို အကျိုးရှိစွာ .....
ဘာသာရပ်အသစ်များ သင်ကြားပို့ ချပေးရန် အင်္ဂလန်တက္ကသိုလ် Manchester Metropolitan University ဖြင့်စင်္ကာပူအခြေစိုက် PSB Academy တို့ လက်မှတ်ရေးထိုး စင်္ကာပူအခြေစိုက် PSB Academy တွင် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် သြစတြေးလျားတက္ကသိုလ်များဖြစ်သော University of Newcastle နှင့် University of Wollongong တို့မှ ဘွဲများကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်စီစဉ်ထားရှိပြီး၊ ၂၀၁၂ စက်တာဘာလမှစ၍ စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့် ခွဲမှု့ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပိုးချပေးနိုင်ရန် PSB ၏ ယူကေ Partner University အသစ်အဖြစ် Manchester Metropolitan University ဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း .....
အင်္ဂလန်နိုင်ငံနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ ပညာရေးကို စိတ်ပါဝင်စားသူ ကျောင်းသား/သူများအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးနိုင်မည့် �STUDY ABROAD- INFORMATION DAYS� အင်္ဂလန်နိုင်ငံနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ ပညာရေးကို စိတ်ပါဝင်စားသူ ကျောင်းသား/ သူများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ အသေးစိတ် ဆွေးနွေး နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး �STUDY ABROAD- INFORMATION DAYS� ကို ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့ မှ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့အတွင်း �STUDY ABROAD DIAMOND OFFICE � တွင် ကျင်းပပြုလုပ် .....
သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသောကျောင်းသားများကို စင်္ကာပူပိုလီများ ၀င်ခွင့်အတွက်ဆက် လက်လက်ခံစဉ်းစားသွားမည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူအများစု စိတ်ဝင်တစား လျှောက်ထားလေ့ ရှိသော စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ Poly ကျောင်းများဝင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ၀င်ခွင့်လက်မခံတော့ ဟူသော သတင်းများကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသည်၊၊ အဆိုပါ သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ CROWN Education မှ ပိုလီကျောင်းများသို့ ဆက်လက်လျှောက်ထား လိုသည့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအတွက် .....
ဟုိုတယ်နှင့်ခရီးသွားစီမံခန့် ခွဲမှု့ ဘာရပ်ပို့ချရာတွင် အင်္ဂလန်မှ နံပါတ် (၁)အဆင့် တက္ကသိုလ် University of Surrey မှ ပညာသင်ထောက်ပံကြေးကမ်းလှမ်းပြီ Hospitality and Tourism degrees အဆင့်တွင် UK ၏ နံပါတ် (၁) သတ်မှတ်ခံရသော University of Surrey မှ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ် ပေါင် ၂၅၀၀ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးမှာ University of Surrey ၏ Foundation နှင့် ညီမျှသော International Study Center တွင်တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း .....
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမသိသူရှားသော ကြက်ကြော်နှင့် အသင့်စား စားစရာလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သော KFC (Kentucky Fried Chicken) ၏ မလေးရှားကောလိပ်
KFCH International College တွင် ဒီပလိုမာဘာသာရပ်များသင်ကြားနိုင်
နှင့် အတွေ့ အကြုံရှင်းလင်းခြင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး စီးပွားရေးကပ်ကြီးဆိုက်နေစဉ်အတွင်း (၁၉၃၀) ခုနှစ်တွင် ကင်တက်ကီပြည်နယ် ကော်ဘင်မြို့ မှ မစ္စတာဟာလန်ဆဲန်းဒါးစ် (Mr.Herland Sanders) ဆိုသူတစ်ဦးသည် ဓါတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်၏ အရှေ့ခန်းတွင် မိမိကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်၊ စားပွဲထိုး၊ ငွေသိမ်းပြီး Sander�s Court and Caf� အမည်ရ စားသောက်ဆိုင်ကလေးကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ (၁၉၃၆) တွင် ကင်တပ်ကီပြည်နယ်တာဝန်ခံမှ .....
TOP TEN စာရင်းဝင် အင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်များ ရွေးချယ်လျှောက်ထားခြင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ အကြောင်း နှင့် အတွေ့ အကြုံရှင်းလင်းခြင်း
TOP TEN စာရင်းဝင် အင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်များ ရွေးချယ်လျှောက်ထားခြင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာ များ အကြောင်း နှင့်နိုင်ငံတကာကျောင်း သားများ အတွက် အထူးစီမံ ထားသော တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အဆင့်များ အကြောင်းရှင်း လင်းပြောကြားပေးမည်၊၊ အင်္ဂလန်မှ .....
University Foundation Program အားတန်းခွဲသစ် YIUS တွင် ဖွင့်လှစ်မည် သြစတြေးလျနိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု Australian Foundation Courses ကို Navitas နှင့် ပူးပေါင်း၍ University Foundation Program ကို YIUS တွင် သင်ကြားပေးလျက်ရှိ May Intake တန်းခွဲသစ်ကို စတင်လက်ခံပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ University Foundation Program သည် နိုင်ငံတကာ .....
MSI y ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှ မန္တလေးမြို့အတွက် Webster University Thailand Campus (WUTC) ၏ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစာမေးပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ်ဦးစီးကျင်းပမည်
Myanmar Search International (MSI) မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ ကျောင်းခွဲ တစ်ခုဖြစ်သော Webster University Campus (WUTC) ၏ဆွေးနွေး ဟောပြောပွဲကို ပထမဆုံး ဦးဆုံး အနေဖြင့် ၂ဝ၁၂ ခုနစ် ၊ မေလ ၊ ၁၉ ရက် (စနေနေ့ ) ၊ မနက် ၁ဝးဝဝ နာရီ မှ ၁၂းနာရီ အထိ ၊ Hotel Mandalay (စံပယ်ဖြူခန်းမ ) ဦးစီးကျင်းပ မည်ဖြစ်ကြောင်း Myanmar Search International (MSI) ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု .....
ပညာသင် ထောက်ပံကြေး US$ 6000 ပေးအပ်မည့် အင်္ဂလန် နံပါတ်(၉)အဆင့်ရှိ LANCASTER University (International Study Center)
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် (၉) အဆင့်ရှိပြီး၊ National Teaching Fellowship (8)ဆုရရှိ ထားသော တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်၊၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် October အတွက် မြန်နိုင်ငံမှကျောင်းသား မောင်ဟန်သော်ထွန်းမှ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် US$ 7000ခန့်ပညာသင်ထောင့်ပံ့ကြေးရရှိသွားခဲ့ပြီး၊ ယခုအခါ ၂၀၁၂ ခုနှစ် October ၀င်ခွင့်အတွက် .....
London School of Commerce မှ မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ပေးအပ်မည့် ပညာသင် ထောက်ပံ့ ကြေး
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ London School of Commerce သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ အချက်အချာ ကျသော နေရာတွင်တည်ရှိပြီး၊ Highly Trusted ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ကာ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ intakes အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ၄၀% ခန့် ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ အသေးစိတ်အချက်အလက် များကို April 28, 2012 နံနက် (၁၀)နာရီမှ (၁၂)နာရီအထိ .....
�အမေရိကန် Oklahoma City University တွင် လက်တွေ့(၄) ပတ်သင်ရမည့် အစီအစဉ်ပါဝင်သည့်၊ Bachelor of Arts (Mass Communication) ဘွဲ့ "
�အမေရိကန် Oklahoma City University တွင် လက်တွေ့(၄) ပတ်သင်ရမည့် အစီအစဉ်ပါဝင်သည့်၊ Bachelor of Arts (Mass Communication) ဘွဲ့ကို ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးနှင့်အတူ ၀င်ခွင့်များ စတင် လျှောက်ထားနိုင်� မြန်မာနိုင်ငံက (၁၀)တန်းအောင်မြင်ထားပြီးသူတွေအနေနဲ့ ၊ တီဗွီ၊ FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့််ခြင်း၊ တီဗွီပရိုဂရပ်တွေ ထုတ် လုပ်ခြင်း၊ Electronic-Media, ကြော်ငြာလုပ် ငန်းနဲ .....
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလောကသို့ အမြန်ဆုံး ဝင်ရောက်လိုသူတိုအတွက် JCU ၏ စီးပွားရေးဘွဲ့များ
အချိန် နှင့် ငွေသည်များစွာတန်ဖိုးရှိပါသည်။ပညာ ၊ အတွေ့အကြုံ နှင့် ဗဟုသုတရှိမှု တို့သည်လည်း ဘဝ နှင့် လုပ်ငန်းခွင့်တွင်သူတကာထက်သာစပါသည်။ထို့ကြောင့် နောင်တစ်နေ့တွင် ဘွဲ့ရပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းခွင် အသီးသီးတို့ဝင်ကြရမည့် ဆယ်တန်းအောင် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများသည် ယခုကတည်းက .....
အင်္ဂလိပ် ၊ မြန်မာ စာစီစာရိုက် Skill နှင့် ရုံးတွင်းကွန်ပျုတာ အသုံးချခြင်း သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုထား ပြီးသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် English ၊ မြန်မာ စာစီစာရိုက် Skill နှင့် ရုံးတွင်း ကွန်ပျုတာ အသုံးချခြင်း သင်တန်းကို TLCC ကွန်ပျုတာ သင်တန်းကျောင်းမှ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါသင်တန်းအား တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုထားသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ .....
UCSI UNIVERSITY မလေးရှာနိုင်ငံ အဆင့်မြင့် ပညာဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် ဖွဲ့စည်း ထားသော မလေးရှာနိုင်ငံ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားပညာရေးစင်တာ (MyCen THE) သည် မလေးရှာနိုင်ငံ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားအတက်ပညာ အဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ရန် ဦးတည်ချက်များဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်း ကာ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားအတက်ပညာရှင်များကို အရှန်အဟုန်ဖြင့် .....
STUDY ABROAD Information Centre Management Development Institute of Singapore (MDIS) မှ ကျောင်းတာဝန်ခံ နှင့် One to One Counseling
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် သက်တန်း အရှည်ကြာဆုံးသော ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်သည့် အပြင် Major ဘာသာရပ် အမျိုးအစားစုံလင်စွာ တက်ရောက်နိုင်သည့် Management Development Institute of Singapore (MDIS) မှ ကျောင်းတာဝန်ခံ နှင့် One to One Counseling ကို STUDY ABROAD Information Centre ရုံးခန်းတွင် April လ (၅) ရက်နေ့ (၄းဝဝ) မှ (၆းဝဝ) အတွင်း .....
စီးပွားရေးနှင့် စာရင်းအင်းဒီပလိုမာဆိုင်ရာ ပညာရေးလမ်းကြောင်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်
နိုင်ငံတကာတွင် ပညာဆက်လက် သင်ယူမည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အတွက် အထူးပြုဘာသာရပ် များကို ရွေးချယ်သင်ယူရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူမှု ရှိစေရန်နှင့် အထောက်အကူပြုစေရန် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စာရင်းအင်း၊ စီးပွားရေး ဘာသာရပ်များ၊ အမေရိကန်တက္ကသိုလ် (၆) ခု၏ ဒုတိယနှစ်သို့ တက်ရောက်နိုင်မည့် .....
၂ဝ၁၂ခုနှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေါင် ၁,၅၀၀ ပေးအပ်ရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့် University of the West of England, Bristol
စီးပွားရေးဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် UK ၏ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော University of the West of England သည် အနောက်တောင်အင်္ဂလန်၏ အကြီးဆုံးမြို့တော် Bristol တွင် တည်ရှိသော modern university ဖြစ်ပြီး၊ London မှ ၉၀မိနစ်ခန့် ကား(သို့မဟုတ်)ရထားဖြင့် ခရီးသွားအကွာဝေးတွင် .....
မတ်လ (၂၄)ရက်တွင် စတင်ကျင့်သုံးမည့် သြစတြေလျကျောင်းသားဗီဇာ STREAMLINED VISA စနစ်သစ်ကြောင့် မြန်မာကျောင်းသားများ ဗီဇာပိုမိုလွယ်ကူ လာနိုင်
သြစတြေလျကျောင်းသား ဗီဇာလျောက်ထားရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး၊ ဗီဇာ ရရှိရန်အထောက် အကူပြုနိုင်သော STREAMLINED VISA စနစ်သစ်ကို မတ်လ (၂၄)ရက်နေ့ မှဗီဇာ လျှောက်ထား သော ကျောင်းသားများစတင် အကြုံးဝင်မည်ဖြစ် ကြောင်း သြစတြေးလျ လူဝင်မှု့ ကြီးကြပ်ရေး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကိုးကား၍ CROWN Education မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှပြောကြားသည် .....
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကလေးများ စင်ကာပူမူလတန်းဝင်ခွင့်ပိုမို ခက်ခဲ့လာနိုင်
ယခုနှစ်ကစပြီးတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံမူလတန်း (Primary 1) ၀င်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ စင်ကာပူနုိုင်ငံသား တွေကိုပဲ လုံးဝ ဦးစားပေးတော့မယ်လို့ CNA သတင်းမှာဖေါ်ပြေ ထားပါတယ်၊၊ ကျောင်းလခတွေသိသိသာသာ သက်သာခြင်း၊ ကျောင်းသားနဲ့အတူမိဘ တစ်ဦးအုပ် ထိမ်းသူ အဖြစ်လိုက်ပါခွင့်ရခြင်း၊ တစ်ချို့ မိဘတွေက မိမိကလေးကို ပညာရေးမှာ ကမ္ဘာ့ထိပ် တန်း အဆင့်ရှိ .....
Natvitas ၏ UMasas Lowell တွင် တက်ရောက်ရန် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ၅၀% အထိ လျှောက်ထား ရယူနိုင်
နိုင်ငံတကာပညာရေး ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ မြန်မာကျောင်းသားများအနေဖြင့် USA ကောလိပ်များကို ၀င် ခွင့်ရရေးမှာလည်း လမ်းကြောင်းများလည်း ပိုမိုများပြားလာပါသည်။ USA ရှိ Navitas ၏ UMass Lowell တွင် ပညာသင်ကြားလိုသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် .....
ဗြတိန်အသိအမှတ်ပြု LCCI (English4Skils) ဖွင့်မည်
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာလိုသူ ကျောင်းသားများအတွက် ဗြတိန်နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု LCCI (English4Skills) သင်တန်းကို British Council ,LCCI (UK) နှင့် Hawall Education တို့ ပူးပေါင်းကာ ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Hawall Education တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဆိုသည် .....
Global Education Show ၌နိုင်ငံတကာကျောင်းပေါင်း၁ဝ ကျောင်းခန့်ပြသခဲ့ပြီး ကျောင်းတာဝန်ခံများက တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးသည့် အစီအစဉ်များပါဝင်ခ
Global Education Show ၌နိုင်ငံတကာကျောင်းပေါင်း ၁ဝ ကျောင်းခန့်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါကျောင်းများ၏ ကျောင်းတာဝန်ခံများမှ တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေးပေးသည့် အစီအစဉ်များ လည်းပါဝင် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါပြပွဲကို SR Education ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့
Myanmar Gemological Institute ကကြီးမှုး၍ ရတနာစိန်တိုက်ဖွင့်လိုသူများ ၊စိန်ကုန်သည်ပွဲစား ပြုလုပ်သူများနှင့် စိန်ပညာအကြောင်း နားလည်လိုသူ ဘူမိဗေဒကျောင်းသား များအတွက် ရည်ရွယ်၍ Certificate in Gemology (Introduction to Diamond) ရက်တိုသင်တန်းကို ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ် မည်ဖြစ်ကြောင်း MGI ထံမှသိရှိရသည်။ .....
စင်ကာပူ BCA Academy ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲပြင်ဆင်မှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးသော ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ BCA Academy ၏ ၂၀၁၂ ခုနစ် ပညာသင်နှစ်အတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုနိုင်ရန် စာမေးပွဲ ပြင်ဆင်မှု ( Exam Preparatory Course ) .....
UKရှိ University of Hertfordshire ကို ၁၉၅၂ ခုနစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Hertfordshire တက္ကသိုလ်သည် Hartsfield မြို့တွင်တည်ရှိပြီး London သို့ နာရီဝက်အတွင်း သွားရောက်နိုင်သည့် မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။၂၀၁၁ ခုနစ် Complete University Guide အရ UK ရှိ No.1 Modern University Guide အရ UK ရှိ No.1 Modem University အနေနဲ့ ရပ်တည်ပြီးနေပြီး .....
၂၀၁၂ခုနှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေါင် ၁,၅၀၀ ပေးအပ်ရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့် University of the West of England, Bristol
စီးပွားရေးဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် UK ၏ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်သော University of the West of England သည် အနောက်တောင်အင်္ဂလန်၏ အကြီးဆုံးမြို့တော် Bristol တွင် တည်ရှိသော modern university ဖြစ်ပြီး၊ London မှ ၉၀မိနစ်ခန့် ကား(သို့မဟုတ်)ရထားဖြင့် .....
သြစတြေလျကျောင်းသား ဗီဇာလျောက်ထားရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး၊ ဗီဇာရရှိရန် အထောက် အကူပြုနိုင်သော STREAMLINED VISA စနစ်သစ်ကို မတ်လ (၂၄)ရက်နေ့ မှဗီဇာ လျှောက်ထား သော ကျောင်းသားများ စတင် အကြုံးဝင်မည်ဖြစ် ကြောင်း သြစတြေးလျ လူဝင်မှု့ ကြီးကြပ်ရေး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကိုးကား၍ CROWN Education မှ .....
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကလေးများ စင်ကာပူမူလ တန်းဝင် ခွင့်ပိုမို ခက်ခဲ့လာနိုင်
ယခုနှစ်ကစပြီးတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံမူလတန်း (Primary 1) ဝင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ စင်ကာပူနုိုင်ငံသား တွေကိုပဲ လုံးဝဦးစားပေးတော့ မယ်လို့ CNA သတင်းမှာဖေါ်ပြေ ထားပါတယ်၊၊ ကျောင်းလခတွေသိသိသာသာ သက်သာခြင်း၊ ကျောင်းသားနဲ့အတူမိဘ တစ်ဦးအုပ် ထိမ်းသူ အဖြစ.....
Natvitas ၏ UMasas Lowell တွင် တက်ရောက်ရန် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ၅၀% အထိ လျှောက်ထားရယူနိုင်
နိုင်ငံတကာပညာရေး ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ မြန်မာကျောင်းသားများအနေဖြင့် USA ကောလိပ်များကို ၀င် ခွင့်ရရေးမှာလည်း လမ်းကြောင်းများ လည်း ပိုမိုများပြားလာပါသည်။ USA ရှိ Navitas ၏ UMass Lowell တွင် ပညာသင်ကြားလိုသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် .....
Study in Singapore 2012 Education Show ကျင်းပမည်
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြား လိုသူများအတွက် လိုအပ်သော ပညာရေး သတင်းအချက်အလက်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် ရရှိစေမည့် Study in Singapore 2012 Education Show ကို Unique life Education Consultancy (ULEC ) မှကြီးမှုး၍ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါပညာရေးပြပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ မတ်လ ၃၁ ရက် ၊နေ့လယ် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ အထိ .....
Navistar ၏နိုင်ငံတကာပညာရေးပြပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားရေးဆွဲအသုံးချခြင်း Excel in Business Application &Accounting လက်တွေ့ သင်တန်းကို ၂၀၁၂ ခုနစ် ၊မတ်လ ၃၀ ရက် တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း Promotion Computer Training Center မှသိရသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများပြုစုခြင်း ၊ ဖြည့်သွင်းခြင်း ၊အရှုံးအမြတ် တွက်ချက်ခြင်း .....
Excel in Business Application & Accounting လက်တွေ့သင်တန်းဖွင့်လှစ်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားရေးဆွဲအသုံးချခြင်း Excel in Business Application &Accounting လက်တွေ့ သင်တန်းကို ၂၀၁၂ ခုနစ် ၊မတ်လ ၃၀ ရက် တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း Promation Computer Training Center မှသိရသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများပြုစုခြင်း ၊ ဖြည့်သွင်းခြင်း ၊အရှုံးအမြတ် တွက်ချက်ခြင်း .....
Murdoch University မှ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့အတွက် Partial Scholarship ပေးအပ်မည်
သြစတြေးလျနိုင်ငံ Murdoch University မှ စီးပွားရေး စီမံခန်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ကို စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် တက် ရောက်လိုသူများအတွက် Partial Scholarship အဖြစ် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃,ဝဝဝ ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ Murdoch University မှ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ကို Singapore Edu Trust (၄) နှစ် ရရှိထားသော.....
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အင်္ဂလိပ်စာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးမာတိကာများကို တက္ကသိုလ် များ၏ ဘာသာ . ရပ်သင်ကြားရေးအဖွဲ့များရေးသားပြုစုလျက်ရှိ်
သင်တန်းနှစ် အလိုက် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အင်္ဂလိပ်စာသင်ရိုးညွှန်းတန်း နှင့် သင်ရိုးမာတိကာများကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၊ ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ၊ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၊ ရန်ကုန် နိုင်ငံခြား ဘာ သာ တက္ကသိုလ် များ၏ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်သင်ကြားရေး အဖွဲများ.....
ပညာင်နှစ်တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အခြေခံသင်ရိုးညွှန်းတမ်းမြောက်မြားစွာရေးဆွဲရန် လိုအပ်ဟု ပညာ ရေး အတိုင်ပင်ခံ တချို့သုံးသပ်
ပညာသင် နှစ်တိုးမြှင့်ရန် အတွက် အခြေခံသင်ရိုးညွန်းတမ်း မြောက် မြားစွာ ရေးဆွဲ ရန်လို အပ်မည် ဖြစ် ကြောင်း ပညာရေး အတိုင်ပင်ခံတချို့က သုံးသပ်သည်။ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့်.....
A+ in English Course တန်းခွဲဖွင့်လှစ်မည်
IT Computer Training (Yangon ) သင်တန်းမှ ဧပြီလ ၁ရက်မှစတင်ပြီး A+ in English Course အသစ်ကို စတင်ဖွင့်လှစ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည် ။ကွန်ပျုတာပြုပြင် ထိန်းသိမ်းနည်း သင်ခန်းစာများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် နားလည်အောင်သင်ကြား ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၊ကွန်ပျုတာ နည်းပညာများနှင့် အင်္ဂလိပ်စာကို.....
WUTH မှအင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစာမေးပွဲကို အခမဲ့ဖြေဆိုနိုင်ရန် MSI တွင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီး
Webster University Thailand Campus (WUTH) မှစစ်မေးသည့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ကိုဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသားများသည် Park Royal Hotel ( Orchid Club) တွင် ( ၂၀၁၂ )ခုနစ် ၊ မတ်လ (၂၆ ) ရ က် (တနင်္လာနေ့) ၊နံနက်(၁၀) နာရီအထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး (၃) နာရီ ကြာဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ Webster University Thailand Campus ၏ ကျောင်း၏ အကြောင်း၊.....
(၁၀)တန်းဖြေဆိုပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအကြံပြု တိုက်တွန်း ချက်
(၁ဝ)တန်းဖြေဆိုထား ပြီးသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အတွက် နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် များအား မိမိတို့ ဆက်လက် သင်ယူရ မည့်ပညာရေးလမ်း ကြောင်းများ အတွက်၊ အကြိုးရှိ စွာ အချိန်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် နှင့် လိုအပ် သည်များ ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားနိုင်ရန် CRWON Education အနေဖြင့် တိုက်တွန်း အကြံ ပြု ချက်များ ထုတ်ပြန်အပ် ပါသည်၊၊.....
MDIS မှ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ကျောင်းများထဲတွင် တစ်ကျောင်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး Edu Trust Certification �4years ချီးမြှင့်ခံရသော Management Development Institute of Singapore (MDIS) မှ Electrical & Electronic နှင့် Mechanical ဘာသာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားပြီး ၊ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု .....
(APC International Educational Network LIMKOKWING University of Creative Technology Malaysia)
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ကမ္ဘာ့အရည် အသွေးမီ နည်းပညာဘွဲ့များကို ချီးမြင့်နေသည့် LIMKOKWING တီထွင် ဖန်တီမှု နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ကြီး ( LIMKOKWING University of Cretive Technology ) သည် ၊ အာဖရိက နှင့် ဥရောပတိုက်ကြီး (၃)ခုရှိ ကွာလာလမ်ပူ ၊လန်ဒန် ၊ ဂက်ဗိုရွန်း ၊ ပေကျင်း ၊ဂျာကာတာ ၊ဖနွမ်းပင် ၊ မဆာရူး ၊မာဗာဗိန်းမြို့ကြီးများတွင် .....
Accounting & Finance ဒီဂရီ နောက်ဆုံးနှစ်သို့ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်နိုင်မည့် ပညာရေးလမ်း ကြောင်းသစ်
ABE Advanced Diploma in Business (သို့) ACCA F1-F9 ပြီးမြောက်ထား သူများ အနေဖြင့် UK ဘွဲ့ကို (၁)နှစ် အတွင်း စင်ကာပူ၌ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာ ဖြင့် ရယူနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူတွင် Edu Trust (၄)နှစ် ရရှိထားသည့် SAA Global Education သည် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ACCA ဘွဲ့ကို ပထမဆုံး ပေးအပ် သော ကျောင်းဖြစ်သည့် အပြင်၊ University of London ၏ အသိအမှတ်ပြု စင်တာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂မှ စတင်၍ SAA-GE တွင် No.1 Green University in UK ဖြစ်သော .....
Ticketing နှင့် ပတ်သတ်သည်များကို သင်ကြားပေးမည့် Domestic Ticketing Course ဖွင့်လှစ်မည်
Ticketing အလုပ်နှင့် ပတ်သတ်သည့် အလုပ်လုပ်နေသူများအတွက် Ticketing တွင်လို အပ် သည့် အချက်များကုိသင်ကြားပေးမည့် Domestic Ticketing Course ကို Auto Net Travels မှ ဖွင့် လှစ် သင်ကြားပေးမည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ � Ticketing နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောရရင် Ticketing ဆိုတာ လက်မှတ်ဖြတ်ရုံနဲ့ မပြီးဘူး ။ နောက် မှာလုပ်တာ တွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ .....
International Education Fair ကျင်းပမည်
Regent ပညာရေးကုမ္ပဏီမှကြီးမှူးပြုလုပ်သော International Education Fair ကို ၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ မတ်လ ၂၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ကမ်းနားလမ်းရှိ Strand Hotel တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ် မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါနိုင်ငံတကာ ပညာရေးပြပွဲတွင် UK နိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်မျာ .....
Fundamental of Human Resources Management သင်တန်းထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်
Fundamental of Human Resources Management သင်တန်းကို ၂၀၁၂ခုနစ် ၊ဧပြီလကုန်ပိုင်းတွင် ထပ် မံဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း Career Poss. Job Training Center မှ သိရသည်။ Human Resources ပညာရပ်မှာ လုပ်ငန်းတစ်ခု ရေရှည်အောင် မြင့်ရန်အတွက် အရေးပါသော ကဏ္ဍ တစ်ခု မှပါဝင်လျှက်ရှိပြီး .....
CCNA (Rounting & Switching)တန်းခွဲသစ်ဖွင့်လှစ်မည်
CCNA ( Rounting & Switching ) တန်းခွဲသစ်ကို ၂၀၁၂ခုနစ် မတ်လ ၂၅ ရက်တွင် ဖွင့် လှစ် သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း Youth Computer Center မှ သိရသည်။ သင်တန်းတွင် 640-802 Module ကို အခြေခံထားကာ သင်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး Routing ,Switching အပိုင်း နှစ်ပိုင်းခွဲ၍ သင်ကြားရမည် ဖြစ်သည် ။.....
Study UK Education in Myanmar နှင့် Scholarship အခွင့်အလမ်းများ အကြောင်း ပညာရေး ဆွေး နွေး ပွဲကျင်းပမည်
ပြည်တွင်းတွင် ကုန်ကျစရိတ်သတ်သာစွာဖြင့် UK ပညာရေးကို လေ့လာ လို့သော ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များ အတွက် Study UK Education in Myanmar နှင့် Scholarship အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနစ် ၊မတ်လ ၂၄ ရက် ၊ မွန်းလွဲ ၂နာရီ မှ ညနေ ၄ နာရီ အထိ Myanmar Imperial College (Inya Compus) တွင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။.....
Plymouth University UK မှ ပေးအပ်မည့် စီးပွားရေးဘွဲ့ဒီဂရီများ SAA , Singapore တွင် တက်ရောက်နိုင်မည့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည်
SAA Global Education မှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ကို အမှတ် (၁၆) ၊မြေညီထပ် ၊ မြေနုလမ်း ၊စမ်းချောင်း ရှိ နိုင်ငံတကာ ပညာ ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ AT & S ( မြေနီကုန်းရုံးခွဲ ) တွင် မတ်လ ၂၅ ရက် နံနက်အထိ တစ်ကြိမ် ၊ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲ ညနေ ၃ နာရီ ခွဲအထိ တစ်ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် ကြီးဖြစ်သော.....
Navitas USA မှ Scholarship ပေးအပ်မည်
Navitals Global Education Group နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အမေရိကန်ကျောင်းများဖြစ်သည့် Western Kentucky University of Massachusetts Boston , University of Massachusetts Dartmouth , University of Massachusetts Lowell နှင့် University of New Hampshire ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသားများ အတွက် Scholarship ပညာသင်ဆု ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ၂၅ရာခိုင်နှုန်း ၊၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ .....
ကွန်ပျုတာပြုပြင်ရေးနှင့် Networking သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းဖြေဆိုထား သူများအတွက် ကွန်ပျုတာအခြေခံမှစ၍ A+ , နှင့် Network အထိ သင်ပေးမည့် သင်တန်းကို TLCC ကွန်ပျုတာစင်တာမှ ဧပြီလ (၉) ရက်တွင် စတင် ဖွင့် လှစ်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသင်တန်းအား တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း ဖြေဆိုထားပြီး ကွန်ပျုတာနှင့် လုံးဝ အထိတွေ့မရှိသူများ ၊ ကွန်ပျုတာ အခြေခံ သင်တန်းတက် ဖူးသူများ ၊ ကွန်ပျုတာအကြောင်း စိတ် ဝင်စားသူများ .....
3D Studio Max ကျွန်းကျင် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
အိုင်တီကွန်ပျုတာ သင်တန်း ၏ စတုတ္တမြောက် သင်တန်းခန်းမ နှင့် လုပ်ငန်းရုံးချုပ်ကို အမှတ် (၁၀) မဟာဗန္ဓုလလမ်းမကြီး ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း နှင့် ၃၉ လမ်းကြောင်းတွင် မတ်လ ၁၀ ရက်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အဆင့်မြင့် သင်တန်း များ ဖြစ်သည့် .....
စင်ကာပူပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားနိုင်သော LASALLE အနုပညာကျောင်း ၏ မြန်မာပြည်တွင် ပထမဆုံးကျင်းပြုလုပ်ပေးမည့် Art & Design WORKSHOP
စင်ကာပူနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများ ဖြင့်ပံ့ပိုး ပေးထားသည့် LASALLE အနုပညာကျောင်းသည် Design, Film, Fine Arts, Media Arts, Dance, Music, Theater ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး.....
AIT တွင်ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားလိုသူများအတွက် OESC မှဝန်ဆောင်မှုပေးမည်
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အာရှနည်းပညာတက္ကသိုလ် (Asia Institute of Technology ) တွင် မဟာဘွဲ့ တက်ရောက်လိုသော မြန်မာကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အတွက် ရာနှုန်းပြည့် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်ရာ ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားလိုသူများကို OESC (ပြည်ပပညာရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာ) မှဝန်ဆောင်မှုပေးကာ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျောင်းတက်ရင်းအလုပ်အတွေ့အကြုံရလိုသူများအတွက် Hotel Management Diploma မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ကျောင်းတက်ရင်းအလုပ်အတွေ့အကြုံရလိုသူများအတွက် အလုပ်ခွင်အခြေပြု Hotel Management Diploma ကို မလေးရှားနိုင်ငံရှိ UCSI University တွင် တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း Synergy Education မှ သိရသည်။ ၄င်းဒီပလိုမာ တက်ရောက်စဉ် (၂)နှစ်ခွဲအတွင်း အဆင့်မြင့် ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်ကြီးများတွင် လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး....
နိုင်ငံတကာတွင်ကြုံတွေ့နေရသောလေယာဉ်မှုးလိုအပ်ချက်ကို ဖြေစည်းရန် နယူးဇီးလန်နိုင်ငံ GOLDEN WINGS FLIGHT TRAINING မှ မြန်မာကျောင်းသားလေယဉ်မှုးသင်တန်းသားများကို ခေါ်ယူခြင်း.
နုိင်ငံတကာရှိ လေကြောင်းလိုင်းများ မှအစလိုင်းငယ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကဂျက်လိုင်းများအဆုံး၊ လေယာဉ်မှုးလိုအပ်ချက်မှာ အလွန်ပင်ကြီးမား နေပါသည်။ INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (နိုင်ငံတကာမြို့ပြလေကြောင်း) ၏တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရ ၊ လာမည့် တစ်ဆယ့်ငါးနှစ် (၁၅နှစ်) အတွင်း၊....
AIT ( Asian Institute of Technology )AITပညာသင်ဆုအစီအစဉ်(NMFA)
(၁) နော်ဝေး နိုင်ငံခြား ဝန်ကြီးဌာန (NMFA) မှ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် မြို့ရှိ နော်ဝေးသံရုံး မှ တဆင့် အရည်အချင်း ပြည့်မီသည့် မြန်မာ ကျောင်းသားများ အား ၂၀၁၂ ခုနစ် သြဂုတ်လ ပထမနှစ်ဝက် စာသင်နှစ်မှ စတင်ကာ မဟာဘွဲ့ ပညာသင်ဆုများပေးသွာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်တွင် (၁)နှစ်လျှင် အယောက်(၄၀)ဦးခန့်ဖြင့် (၃)နှစ် အတွက် ထောက်ပံ့ရန် ....
တပ်မတော်ခန်းမတွင်March လ 23ရက်နေ့မှ March 25 ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်မည့် Global Education Show တွင် Smart Resources International Education & Consultancy မှ ပါဝင်ပြသမည်
ယင်း GES ပွဲတွင် SR မှ Organize ပြုလုပ်သော နိုင်ငံတကာ ကျောင်းပေါင်း (၁ဝ) ကျောင်းခန့် ပါဝင်ပြသမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းပြပွဲတွင် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းများမှ Counselor များကိုယ်တိုင် လာရောက်ဆွေးနွေး ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါအပြင် SR Education ၌ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် IGCSE , IELTS နှင့် English Four Skills သင်တန်းများ အကြောင်း လေ့လာနိုင်မည့် အပြင် ....
အင်္ဂလန်ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် နာမည်ကျော်တက္ကသိုလ်ကြီးများသို့ ၀င်ခွင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် သိကောင်းစရာများကို အင်္ဂလန်မှ တာဝန်ရှိသူများကိုယ်တိုင်လာရောက် ရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါမည်၊၊
အင်္ဂလန်ရှိ နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်ကြီးများဖြစ်သော London School of Economics, University of Oxford, University of Cambridge စသော တက္ကသိုလ်ကြီးများသို့ ၀င်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ရန်နှင့် ဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ၀င်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးမည့် GCE �A� သင်တန်းများနှင့် အဆင့် (၁) မှ (၁၀)အတွင်းရှိ နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်ကြီးများသို့ ၀င်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင် ရန်ပြင်ဆင်ပေးမည့် ....
စင်ကာပူ NIM မှ အင်နီယာဒီပလိုမာအောင်မြင်ပါက သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်နှစ်ခုတွင် အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Nan yang Institute of Management (NIM) မှ Diploma in Construction Engineering အောင်မြင်ပြီးပါက သြစတြေးလျ ရှိ အထင်ကရ တက္ကကြီးများဖြစ်သော La Tribe University (Bendigo Campus ) နှင့် Griffith University တို့တွင် Bachelor of Engineering ကို ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း Synergy Education မှ သိရသည်။ NIM မှ ချီးမြှင့်မည့်.... Read More �
ဇန္နဝါရီလ ၊ ၂ဝမှ ၂၉ ရက်အတွင်း PSB Academy ကျောင်းလျှောက်သူများ၊ ကျောင်းဝင်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်ပထမဆုံးစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် �Best Singapore Education Award 2012� �Finalist of Best Singapore Education Award 2011� ဆုရရှိထားသော PSB Academy ကျောင်းသည် ယခုအခါ ၂ဝ၁၂ နှစ်ဦးပိုင်းအစီစဉ်တစ်ရပ် အနေဖြင့် GCE �O� Level / IGCSE ကျောင်းသားများအတွက်အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကို ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့ တို့တွင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Myanmar Search International (MSI) ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု မှသိရှိရပါသည်။ PSB Academy မှ English Placement Test ကိုမိမိ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းကိုသိရှိနိုင်စေရန်နှင့်....
ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၏ THE AUSTRALIAN SOCIETY FOR ULTRASOUND IN MEDICINE (ASUM)
၏အာရှတိုက်ဆိုင်ရာ POST GRADUATE DIPLOMA OF MEDICAL ULTRASONOGRAPHY (ASIA) (pg DMU (ASIA)) အကြောင်းသိကောင်းစရာ
- ဩစတြေးလျနှင့်ဇီလန်ရှိ THE AUSTRALIAN SOCIETY FOR ULTRASOUND IN MEDICINE (ASUM) ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(40) ကျော်ကပင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
- Asum သည် ဩစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်၏SONOGRAPHY ACCREDITATION REGISTRY (ASAR) ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သည့်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။....
SUNWAY UNIVERSITY မှ ထိုက်တန်သောမြန်မာကျောင်းသားများ အတွက် CANADIAN INTERNATIONAL MATRICULATION PROGRAMME စကော်လားရှစ်ချီးမြှင့်ခြင်း။်
- SUNWAY UNIVERSITY ကိုတည်ထောင်သူ Tan sri Dato� Seri Dr. Jeffrey cheah သည် sun way University အတွက် Jeffrey Cheah Foundation ကို ထူထောင်ပေးပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပညာရေးကိုထိုက်တန်သော ပြည်တွင်းပြည်ပကျောင်းသားများ ရယူနိုင်စေရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။ Sunway University သည် Tier5တက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီး၊ စတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းကပင်....
အင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်မှ ပေးအပ်မည့် ဇီဝဆေးသိပ်ပံဘွဲ့ကို နောက်ဆုံးနှစ်မှ စတင်တက်ရောက်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး
သုတေသန လုပ်ငန်းများ ကို စိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသားကျောင်းသူ များအတွက် University of Bradford မှ ချီးမြှင့်သည့် BSc (Hons) in Biomedical Science ဘာသာရပ်ကို လေ့လာနိုင်ပြီး ဆေးပညာနှင့် ဆက်စပ်စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ ကို သင်ယူလိုသူများ အတွက် University of Wales မှ ချီးမြှင့် မည့် ....
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံးပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ချီးမြှင့်ပေးအပ်မည့် ကနေဒါ Ontario International College
လူနေမှုအဆင့် အတန်း မြင့်မား၍ ယဉ်ကျေးမှုများပြား စုံလင်ကာ မြို့တော်၏သန့်ရှင်းမှုနှင့် စိတ်ချ လုံခြုံရ မှုတို့တွင် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုသော ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့တော် Toronto တွင် တည်ရှိသည့် Ontario International College (OIC)သည် နိုင်ငံတကာပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသားကျောင်းသူ များက...
ဘာသာရပ်ပေါင်း ၆၀၀ကျော် လျှောက်ထားနိုင်မည့် University of the West of England, Bristol
စီးပွားရေးဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် UK ၏ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော University of the West of England သည် အင်္ဂလန်အနောက်တောင်ပိုင်း Bristol မြို့တွင် တည်ရှိသော modern university ဖြစ်ပြီး၊ London မှ ၇၅မိနစ်ခန့် ရထားဖြင့်ခရီးသွားအကွာဝေးတွင် တည်ရှိပြီး၊....
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်မှ ပညာသင်ဆု ၊ အလုပ်ကိုင်များနှင့် ပတ်သတ်၍ စတင်ကမ်းလမ်း
အင်္ဂလန် တက္ကသိုလ်မှ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပညာသင်ဆု ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ ၂၀၁၂ ခုနစ်မှ စတင်ကမ်းလမ်းမှုများရှိလာခဲ့ပြီး ယင်းကဲ့သို့ ကမ်းလှမ်းမှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ...
LASALLE အနုပညာကျောင်း၏ Art and Design Folio Workshop မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမည်
အနုပညာ ဘာသာရပ်များ ကို လေ့လာသင်ယူမည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ၊အထူးသဖြင့် Interior Design , Fashion Design ဘာသာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူရာတွင် ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် Port Folio များ တင်ပြရာတွင် အခက်အခဲမရှိ တင်ပြနိုင်ရန် ....
သြစတြေးလျနိုင်ငံ Murdoch University မှ MBA Schlorship ပေးမည်
သြစတြေးလျနိုင်ငံ Murdoch University နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Koplan Higher Education Academy မှ Murdoch University (Australia) MBA Program အတွက် ပညာသင်ဆုမေလ ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက် ...
RV! CENTRE YANGON မှ Cambridge �A� Level သင်တန်းဖွင့်မည်
Combridge international Examination (CIE) မှ ကျင်းပသည့် Combridge �A� Level ကို ဝင်ရောက် ဖြေဆိုနိုင် ရန် အတွက် Combridge �A� Level သင်တန်းကို RV! CENTER YANGON မှ မေလ၂ ရက်နေ့ တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ...
စင်ကာပူပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ကျောင်းသားမိဘများအတွက် ၂၀၁၂ ခုနစ် ၊မတ်လ ၂၃ ရက်တွင် Stand Hotel ၌ စင်ကာပူနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ ပညာရေးပြပွဲကို STUDY ABROAD မှ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။...
Bellerbys College မှချီးမြှင့်မည့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး
UK ၏ အထင်ကရ မြို့များဖြစ်သော Brighton, Cambridge, London နှင့် Oxford မြို့များတွင် တည်ရှိသော Bellerbys College မှ A Level နှင့် Diploma တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားများအတွက် Term အလိုက် bursary ချီးမြှင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ A Level တက်ရောက်ချင်သူများအတွက် 2012 January နှင့် 2012 April Inake များ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး5Terms တက်ရောက်ရမည်...
၂၀၁၂ မှစ၍ သြစတြေးလျ James Cook University မှ ဘာသာရပ် အသစ်များ တိုးချဲ့သင်ကြားပေးမည်
၂၀၁၂ ခုနှစ်စ၍ သြစတြေးလျ James Cook University မှ ဘာသာရပ် အသစ်များ တိုးချဲ့သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း CROWN Education မှ သိရသည်။ James Cook University ၏ Singapore Campus တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လမှစ၍ Bachelor of Business ဘွဲ့တွင် Accounting မေဂျာအသစ် စတင် သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းဘာသာရပ်ကို Australian Society of Professional Accountants ...
PSB Academy မှ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်း စာမေးပွဲ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင်ပြုလုပ်မည်
စင်ကာပူနိုင်ငံ PSB Academy တွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားရန်အတွက် IELTS/TOEFL အမှတ်စာရင်း မတင်ပြနိုင်သူများအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကို ယခင်က စင်ကာပူ နိုင်ငံတွင် ဖြေဆိုရပြီး ယခုအခါ PSB မှ တာဝန်ရှိပြီး ယခုအခါ PSB မှ တာဝန်ရှိသူ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ရန်ကုန်တွင် ဝင်ရောက် ဖြေဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ လအတွင်း ရန်ကုန်တွင် တစ်ကြိမ်နှင့် မန္တလေးတွင် ...
Curtin Singapore နှင့် Curtin Sydeny ကျောင်းဝင်ခွင့် စတင်လျှောက်ထားနိုင်
Curtin University of Technology နှင့် Sydney တွင် ကျောင်း တက်ရောက်လိုသူ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် Curtin Singapore ကို လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ၂၀၁၂ မတ်လတွင် Curtin Sydney တန်းခွဲ သစ်များကို လျှောက်ထား နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ Curtin University of Technology ၏ Campus နှစ်ခုဖြစ်သော Curtin Singapore နှင့် Curtin Sydney Campus တို့တွင်...
စာရင်းကိုင်ဘာသာရပ် သင်ကြားလိုသူများ SAA-GE တွင် ရာနှုန်းပြည့် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်
စင်ကာပူ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့ စာရင်းကိုင် အဖွဲ့အစည်း (Institute of Certificate Public Accountants of Singapore-ICPAS) မှ ဖွင့်လှစ်ထားသော Singapore Accountancy Academy Global Education (SAA-GE) ကျောင်းမှ January 2012 Intake တွင် ACCA Course အတွက် ရာနှုန်းပြည့် ပညာသင်ဆုကို လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
ဆိုးလ်အမျိုးသား တက္ကသိုလ် (Seoul National University) SNU
ကိုရီးယားတို့သည် ပညာရေးကို စွမ်းအားတစ်ရပ် အနေဖြင့် လက်ခံ ထားကြသူများ ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ် ကိုလိုနီ လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ပြီး ကတည်းက ဆိုးလ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ်ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံသစ်အတွက် ပထမဦးဆုံး မွေးထုတ် ပေးနိုင်ခဲ့သည့် ပညာအခြေခံ ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆိုးလ် တက္ကသိုလ်တွင် ကောလိပ်ပေါင်း ၁၆ ကျောင်းဖြင့် ပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားသည်..
ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ် (University of Hong Kong)
ဟောင်ကောင် တက္ကသိုလ်သည် အစဉ်အလာရှိခဲ့သည့် ကျောင်းကြီး တစ်ကျောင်း ဖြစ်သည်။ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ရှိပြီးဟု ဆိုသည်။ ယခုအချိန်အထိ ကမ္ဘာ့ အဆင့်မီ ကျောင်းကြီး တစ်ကျောင်း ဖြစ်စေရန် ထိန်းသိမ်း နိုင်ခဲ့သည်။ မဟာဌာနကြီးပေါင်း ၁၀ ခုနှင့် သုတေသနဌာန ပေါင်းများစွာ ဖွင့်လှစ် ထားသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အနှံ့ ပညာရှင်များ အသိအမှတ် ပြုကြရသည့် ဌာနများဖြစ်သည်...
စင်ကာပူ အမျိုးသား တက္ကသိုလ် (National University of Singapore)NUS
NUS သည် စင်ကာပူ နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာ့ အဆင့်မီ တက္ကသိုလ်ကြီး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများနှင့် စွန့်ဦး တီထွင် ပညာရှင် မွေးထုတ်ရေး အစီအစဉ်များကြောင့် နာမည်ကြီးသည်။ NUS သည် တက္ကသိုလ် သုံးခုကို ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကျောင်းကြီး တစ်ခုဖြစ်သည်။ Kent Ridge တက္ကသိုလ်၊ Bukit Timah တက္ကသိုလ်နှင့် Duke-NUS Graduate Medical School တို့ကို ...
တိုကျိုတက္ကသိုလ် (The University of Tyokyo)
တိုကျို တက္ကသိုလ်ကို ၁၈၇၇ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အမျိုးသား တက္ကသိုလ်ကြီး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ်တိုင်းတွင် ပညာရေးဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင် လုပ်ကိုင် နေကြသည့် အတွက်လည်း ပညာတတ် လောကတွင် နာမည်ကြီးသည်။ ကျောင်းအနေဖြင့် ပညာတတ် လူ့ဘောင်နှင့် ...
ဟောင်ကောင်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (Hong Kong University of Science and Technology)
ဟောင်ကောင် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(HKUST) သည် လူငယ်များနှင့် ပညာရည်မြင့်မား ထက်မြတ် သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်သည့် ကျောင်း ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ပညာရေး သုတေသန လုပ်ငန်းများ၊ ဘွဲ့လွန် သင်တန်းများ တက်ရောက်ရန် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကျောင်း၅ကျောင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင် ထားသည် ...
နယူဇီလန် ဗီဇာ လျှောက်ထားချိန် ကြာမြင့်မှု့ ကြောင့် မြန်မာ ကျောင်းသားများ (၆) လခန့် ကြိုတင် ပြင်ဆင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ နယူဇီလန် ဗီဇာ လျှောက်ထားရာတွင် ဘန်ကောက်ရှိ နယူဇီလန် သံရုံးတွင် လျှောက်ထားရပြီး၊ ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ လျှောက်ထားသည့် အတွေ့အကြုံအရ Visa Processing ကြာမြင့်ချိန် အနည်းဆုံး (၆)လခန့် ကြာမြင့်နိုင်သဖြင့် မိမိတို့ လျှောက်ထားမည့် ကျောင်းဖွင့်ချိန် မတိုင်မှီ အနည်းဆုံး (၆)လခန့် ကြိုတင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ...
PSB Academy မှအင်္ဂလိပ်စာ အရည်ချင်းစာမေးပွဲစနစ်ပြောင်းမည်
စင်္ကာပူနိုင်ငံ PSB Academy တွင် တက်ရောက် ပညာသင်ကြားရန်အတွက်၊ IELTS/TOEFL အမှတ်စာရင်း မတင်ပြနိုင် သူများအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကို ယခင်က စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ဖြေဆိုရ လျှက်ရှိရာ ယခုအခါ၊ PSB မှ တာဝန်ရှိသူ၏ ကြီးကြပ်မှု့ ဖြင့် ရန်ကုန်တွင် ၀င်ရောက် ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း၊ ရန်ကုန်တွင် တစ်ကြိမ်နှင့်၊ မန္တလေးတွင် တစ်ကြိမ် ကျင်းပ ပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ...
2011 ခုနှစ်အတွက် PSB Academy ၏ နောက်ဆုံး စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်နှင့် MSI မှ ကျောင်းဝင်ကြေး စကာင်္ပူ ဒေါ်လာ (၃၈၃) ကင်းလွတ်ခွင်
�Best Singapore Experience Award 2010 ဆု ရရှိထားသော PSB Academy ကျောင်းသည် ယခုအခါ ၂၀၁၁ နှစ်ကုန်ပိုင်း အစီအစဉ် တစ်ရပ် အနေဖြင့် �O� Level / IGCSE ကျောင်းသားများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း Myanmar Search International (MSI) ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှုမှ သိရှိရပါသည်။ PSB Academy ၏ အင်္ဂလ်ိပ် စာဖြေဆိုခွင့် အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်မှာ ...
နိုင်ငံတကာတွင် နာမည်ကြီး Fashion Designer တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်း
STUDY ABROAD Information Centre မှ ကြီးမှုးစီစဉ်၍ ဖက်ရှင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို လာမည့် အောက်တိုဘာလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေ ဘုရားလမ်းရှိ ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်တွင် နံနက် (၉း၀၀) နာရီမှ နေ့လည်(၁၁း၀၀) ထိ ကျင်းပ ပြုလုပ် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပြပွဲတွင် စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ MIDIS ကျောင်းမှ ...
UK ပညာရေးကို စိတ်ဝင်စား၍ UK သို့သွားရောက် ပညာ သင်ကြားလိုသူများ၊ UK qualification ကို ပြည်တွင်းတွင် သင်ကြား ရယူလိုသူများအတွက် Study in UK ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်
SULEC မှ ကြီးမှုးကျင်းပ၍ Study in UK ပညာရေး ပွဲတော်ကို October လ (18) ရက်နေ့ (အင်္ဂါ) နေ့ တွင် The Traders Hotel ၌ အချိန် (၁) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် UK တွင် ပညာသွားရောက် သင်ကြားလို သူများအတွက် ...
လူဦးရေ တိုးပွားလာသော စင်ကာပူနိုင်ငံ
Singapore နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသားဦးရေမှာ ယခုနှစ် ဇွန်လ အကုန်တွင် (၅.၁၈မီလီလျံ) ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် (၁၀၇.၀၀) ဦးရေ တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။ (၁၉၉၀ခုနှစ်) မှစ၍ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အဖြစ် Permanent Resident ဦးရေသည် ကျဆင်းသွားရာ ယခုအခါ ၁.၇% (၅၃၂.၀၀၀) ဦးရေအထိ နိမ့်ကျသွားကြောင်းကို Myanmar Search International (MSI) ၏ တာဝန်ရှိသူမှ www.todayonline.com က ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ...
သြစတြေလျ ကျောင်းသား ဗီဇာစည်းကမ်းချက်များ အပြောင်းအလဲ မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေလာနိုင်
နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများ သြစတြလျ ကျောင်းသား ဗီဇာ လျှောက်ထားရာတွင် စည်းမျဉ်း စဉ်းကမ်းများ တင်းကြပ်လေ့ရှိပြီး၊ ယခုအခါ လိုအပ်ချက်များကို ဖြေလျှော့ ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်၊၊ အဆိုပါ အစီအစဉ်အရ သြစတြလျ ကျောင်းသား ဗီဇာ လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်ချက်အချို့ကို ပယ်ဖျက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး....
(CURTIN SINGAPORE & CURTIN SYDNEY) ပညာရေးသတင်း
Australia ၏ အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်ဖြစ်သော Curtin University of Technology Singapore နှင့် Sydney ကျောင်းများတွင် တက်ရောက်လိုသော့ မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ၏ ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာလ (Curtin Singapore) နှင့် ၂၀၁၁ မတ်လ (Curtin Sydney) တန်းခွဲသစ်များ ကို စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ....
University of London သို့ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိနိုင်မည့် SIM (Singapore) ၏ Diploma in Accounting Course
ကျောင်းသားများအတွက် ဝင်ခွင့် ခက်ခဲသော University of London သို့ တိုက်ရိုက် တက်ရောက် ခွင့်ရရှိမည့် Course တစ်ခုဖြစ်သည့် Diploma in Accounting (DACC) ကို January 2012 Intake မှ စ၍ SIM Institute တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။ Diploma in Accounting Course မှာ(18) လ တက်ရောက် ရမည်ဖြစ်ပြီး Intake အနေဖြင့် January လ တစ်ခုတည်းသော ထားရှိ ပေးထားကြောင်း သိရှိ ရပါသည်....
IGCSE Exam တွင် Horizon မှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်ခဲ့
KOICA မှ မြန်မာအဆင့်မြင့် အရာရှိ ၂၀ ဦးကို အောက်တိုဘာလတွင် ကိုးရီးယားသို့ ဖိတ်ခေါ်၍ သင်တန်း ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့တွင် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့် အရာရှိ ၁၀ဦးကို ကိုရီးယားမှ ဖိတ်ခေါ်၍ Agriculture Community Leadership Development for Myanmar သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း....
KOICA မှ မြန်မာအဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများကို အောက်တိုဘာလတွင် ကိုးရီးယားသို့ ဖိတ်ခေါ်သင်တန်း ပေးမည်
စကာင်္ပူ နန့်ယန်းကျောင်းတွင် Diploma in Construction Engineering ဘာသာရပ်အသစ်ကို စတင်ပို့ချမည်
စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ Edu Trust ရရှိထားသော နန့်ယန်းကျောင်းတွင် Diploma in Construction Engineering ဘာသာရပ် အသစ်ကို စတင်ပို့ချတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသင်တန်းမှ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာများအား မွေးထုတ် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများ....
Nanyang Institute of Management NIM မှ Civil & Construction Management Engineering အကြောင်းကို MSI Office တွင်ရှင်းလင်းပြောကြားမည်
NIM Diploma in Construction Engineering ပြီးမြောက်သူများသည် University of South Australia တွင် Bachelor of Construction Management & Economics နှင့် Bachelor of Built Environment ကို Second Year မှ စတင်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် Griffith University တွင် Bachelor of Engineering (Civil) ကို ၂နှစ် နှင့် ၅လ ဆက်လက် သင်ယူနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရှိသည်ဟု....
Shinawatra University (SIU) မှ ပြုလုပ်သော ပညာသင်ဆုအတွက် Master Program တွင် MBA ဘာသာ အများဆုံးလျှောက်ထား
Overseas Education Service (OESC) မှ ကြီးမှူးကျင်းပပြီး Shinawatra University (SIU) မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ကျောင်းခေါ်ချိန်အတွက် စက်တင်ဘာ ၁ဝရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ Park Royal Hotel တွင်ပြုလုပ် ကျင်းပပေးခဲ့သော ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲနှင့် စက်တင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့၌ OESC Seminar Room တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ပညာသင်ဆု အတွက် အင်တာဗျူးတို့တွင် Master Program တွင် MBA ဘာသာရပ်ကို လျှောက်ထား....
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Bachelor နှင့် Master Degree များ ရယူနိုင်မည့် ERC Institute ၏ Diploma Program
ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ Bachelor နှင့် Master Degree များကို ရယူလိုသူ ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ERC Institute ၏ Diploma Program အား December 2011 Intake အမှီ STUDY ABROAD Information Centre မှ လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ Diploma Program တွင် ဘာသာရပ်များ အနေဖြင့် Business Administration, Enterprise Development, Business Psychology , Enterprise Development (Real Estate), Tourism & Hospitality Management အစရှိသည်....
စကာင်္ပူနိုင်ငံ တွင်ကျောင်းတတ်လိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အထူးသတင်းကောင်း
YIUS ကျောင်းမှ ကြီးမှုးပြီး စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ In world Institute ကျောင်း ဆွေးနွေးပွဲအား အောက်တိုဘာလ ( ၂ ) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် ၁၁ နာရီ မှ ၁ နာရီထိ Padamyar Room ရှိ Ball Room ( I ) တွင် ကျင်းပပြု လုပ်မည်ပြီး Scholarship ကျောင်းလျှောက်ချင် သူများအတွက်လည်း Scholarship Test ကို ပြုလုပ်မည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ၄င်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ မိမိအတွက် အကောင်းဆုံး ပညာရေး လမ်းကြောင်းကို မည်သို့ ရွေးချယ်ရမည်၊ မိမိဖြစ်လိုသော အင်ဂျင်နီယာ၊ ဆရာဝန်၊ သိပံပညာရှင် စသည့် ကျောင်းသား ရည်ရွယ်ချက်များ ဖြစ်မြောက် အောင်မြင်အောင်....
Curtin Singapore ၏ ပညာသင်ဆု အတွက် ကျောင်းစတင်လျှောက်ထားနိုင်
သြစတြေးလျ အခြေစိုက် တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်သည့် Singapore Curtin University မှ ထူးချွန်သည့် ကျောင်းသား ၂ဦးအား Second Semester တွင ကျောင်းလခ၏ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းအား ပညာသင်ဆုငွေ အဖြစ်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် 2011 November Intake အမှီ ကျောင်းလျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Curtin University တွင် Accounting, Accounting & Finance, Banking & Finance, Finance & Marketing, International Business Management, Human Resource Management, Management & Marketing, Marketing & Advertising, Marketing & Public Relations, Logistics & Supply Chain Management အစရှိသည့် ဘာသာရပ်မျာအား....
နိုင်ငံတကာတွင် သွားရောက် ပညာသင်ကြားမည့်သူများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ အထူးပြင်ဆင်မှု သင်တန်းဖွင့်လှစ်
နိုင်ငံတကာရှိ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များတွင် တက်ရောက်လိုသူများ၊ IELTS နှင့် TOFEL ဖြေဆိုရန် ပြင်ဆင် နေသူများနှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ပိုမိုကျွမ်းကျင် တိုးတက်လိုသော
သူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ မန္တလေးမြို့ရှိ MCTA မှ GEIP (General English Intensive Programme) အင်္ဂလိပ်စာ အထူးပြင်ဆင်မှု သင်တန်းကို အောက်တိုဘာလ (၁ဝ) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သင်တန်း ကာလမှာ (၃)လခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကြေးမှာ ၂၇၀,ဝဝဝ ကျပ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ MCTA မှ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ပိုလီတက္ကနစ်ကျောင်းများနှင့်....
University of Wollongong (UOW)မှ ဒုတိယနှစ်သို့ တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားမည့် ကျောင်းသားများ အတွက် ကျောင်းဖွင့်ချိန် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်
ယခင်နှစ်စဉ် သြဂုတ်လတွင် တစ်ကြိမ်သာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ (၂ဝ၁၂)ခုနှစ်မှစ၍ တစ်နှစ်ကို နှစ်ကြိမ် (ဇန်နဝါရီလ နှင့် သြဂုတ်လ)တို့ကို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်မည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်မှ စတင် တည်ထောင်ခဲ့သော Australia နိုင်ငံရှိ UOW သည်နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအတွက် သင်ကြားရေး ပိုင်ဆိုင်ရာ၊ သင်ယူမှု ဆိုင်ရာများတွင် ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ် ယနေ့ ထက်တိုင်ဦးဆောင်မှု ပြုခဲ့သော တက္ကသိုလ် ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ကြားခြင်း၊ သုတေသန လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း နယ်ပယ်များတွင် နိုင်ငံပေါင်း(၃၅)နိုင်ငံနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ် စုစုပေါင်း (၁၅ဝ)....
YIUS ကျောင်းမှကြီးမှုးပြီး စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ In world Institute ကျောင်း ဆွေးနွေးပွဲအား အောက်တိုဘာလ ( ၂ ) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် ၁၁ နာရီ မှ ၁ နာရီထိ Park Royal Hotel ရှိ Ball Room ( I ) တွင် ကျင်းပပြု လုပ်မည်ပြီး Scholarship ကျောင်းလျှောက်ချင် သူများအတွက်လည်း Scholarship Test ကို ပြုလုပ်မည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ၄င်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ မိမိအတွက် အကောင်းဆုံး ပညာရေး လမ်းကြောင်းကို မည်သို့ ရွေးချယ်ရမည်၊ မိမိဖြစ်လိုသော အင်ဂျင်နီယာ၊ ဆရာဝန်၊ သိပံပညာရှင် စသည့် ကျောင်းသား ရည်ရွယ်ချက်များ ဖြစ်မြောက် အောင်မြင်အောင်....
Fashion Design နှင့် 3D Animation Design ဘာသာရပ်များကို UCSI University တွင် သင်ကြားနိုင်
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ Fashion Design နှင့် 3D Animation Design ဘာသာရပ်များကို မလေးရှား နိုင်ငံရှိ UCSI University တွင် သင်ကြား နိုင်ပါသည်။ UCSI University မှ သင်ကြားပေးသော Fashion Design ဘာသာရပ်တွင် ယနေ့ဖက်ရှင် လောက၏ တိုးတက် ပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီ လိုက်ဖက်သော တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ၊ ပြုပြင်မွမ်းမံမှု ၊ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်မှုများ အတွက် လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရသည်။ ထို့အပြင် မိမိတို့ ဖန်တီးထားသော ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းများကို ထုတ်လုပ်မှု ၊ Branding ၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေမှု....
"အင်္ဂလန် နံပါတ်(၉)အဆင့်ရှိ LANCASTER University (International Fourndation Year) အတွက် ပညာသင် ထောက်ပံကြေး US$ 7000 (ခန့် ) မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသားပထမဆုံးရရှိ"
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွင် (၉) အဆင့်ရှိပြီး၊ National Teaching Fellowship (8)ဆုရရှိ ထားသော တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်၊၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် October အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ မှ ကျောင်းသား မောင်ဟန်သော်ထွန်းမှ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် US$ 7000ခန့်ပညာသင် ထောင့်ပံ့ကြေး ရရှိသွားကြောင်း၊ ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်ထားပေးခဲ့သည့် CROWN Education မှ သိရသည်၊၊ တက္ကသိုလ်သို့ တိုက်ရိုက် ၀င်ခွင့် မရရှိသူများအတွက် LANCASTER University တွင် International Foundation Year တက်ရောက်နိုင်ပြီး....
"ကုန်ကျစားရိတ်သက်သာစွာဖြင့် အင်္ဂလန်ဘွဲ့ကိုရယူနိင်မည့် ပညာရေးလမ်းကြောင်းသစ်"
နိုင်ငံတကာ ပညာရေး လမ်းကြောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာသည့် အလျှောက်၊ ရွေးချယ်စရာ ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်များ၊ နိုင်ငံများကို မိမိတို့ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေ၊ စိတ်ဝင်စားသည့် ဘာသာရပ် အခြေအနေများအလိုက် ရွေးချယ် တက်ရောက် နိုင်ပါသည်၊၊ CROWN Education အနေဖြင့် ပညာရေး အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ အစည်းအဖြစ်၊ ရပ်တည်လျှက်၊ လူတန်းစား အသီးသီးအတွက် မိမိတို့ ၏ အခြေအနေ အရပ် အရပ်အလိုက်၊ သင့်တော်သည့် နိုင်ငံ၊ ကျောင်း၊ ဘာသာရပ် များကို လမ်းညွှန်ခြင်း....
Singapore ရှိ MDIS တွင် Biomedical Science ဘာသာရပ်အား တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် November Intake အတွက်. စတင်လျှောက်ထားနိုင်
Management Development Institute of Singapore (MDIS) တွင် Biomedical Science ဘာသာရပ်ကို တက်ရောက်ချင်သူ မြန်မာနိုင်ငံမှ Pharmacy နှင့် Dental ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် November Intake အတွက် STUDY ABROAD Information Centre တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ Biomedical Science ဘာသာရပ်အား Pharmacy နှင့် Dental ဘွဲ့ရရှိပြီး သူများအနေဖြင့် (3)နှစ် (6)လ အစား လ(30) သာ တက်ရောက် ရမည် ဖြစ်ပါသည်....
STUDY ABROAD Information Centre တွင် SIM (Singapore) မှ ကျောင်းတာဝန်ခံ ကိုယ်တိုင် January (2012) Intake အတွက်. Application များကို လက်ခံပြီး Interview ပြုလုပ်ပေးမည်
Singapore နိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်နေပြီး The First Private ဖြစ်သော SIM University ၏ 2012 Intake အတွက် Application များကို စတင် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ SIM ၏ 2012 January Intake အတွက် application များကို SIM မှ ကျောင်းတာဝန်ခံ ကိုယ်တိုင် September (26) ရက်နေ့တွင် လက်ခံပြီး STUDY ABROAD Information Centre ရုံးခန်း ၌ အင်တာဗျူး ပြုလုပ် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ....
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု UK မှ တိုက်ရိုက် ချီးမြှင့်သည့် Network ၊ System ၊ Customer Supports ဆိုင်ရာ IT Diploma သင်တန်း. အပတ်စဉ် (3/2011) Ocean Gate Training Centre တွင် ဖွင့်လှစ်မည်
စရိတ်စက သက်သာစွာဖြင့် အချိန်တို (၆)လမှ (၈)လအတွင်းတွင်၊ UK မှ တိုက်ရိုက် ချီးမြှင့်ပြီး နိုင်ငံတကာက လက်ခံ အသိအမှတ် ပြုထားသော City & Guilds Diploma in IT Systems Support သင်တန်းများကို စက်တင်ဘာလ အကုန်တွင် Ocean Gate သင်တန်းကျောင်း ၌ ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသင်တန်းတွင် Foundation Module (၂)ခုနှင့် Core Module (၄)ခုကို အသေးစိတ် သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းများတွင် ခေတ်စားနေသော ?သင်ရိုး စာအုပ်သာမက လက်တွေ့ ဆန်ဆန်သင်ယူမှု ပုံစံအသစ်?....
Kaplan Higher Education Academy မှတစ်ဆင့် US ရှိ တက္ကသိုလ်များသို့ ဒုတိယနှစ်မှ စတင် ပညာသင်ကြားနိုင်
စင်ကာပူနိုင်ငံမှတဆင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်ကြီးများ သို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အနေဖြင့် Kaplan ၏ Diploma in General Studies (US Pathway Program) ဘာသာရပ်အား စင်ကာပူနိုင်ငံ ၌ (၇) လ တက်ရောက်ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံရှိ Bayor University, Marist, Northeaster University, Stevens Institute of Technology (The Innovation University), The University of UTAH, The University of Vermont စသည့် တက္ကသိုလ်များ၏ ဒီဂရီတန်း ဒုတိယနှစ်သို့ စတင် တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
Diploma in Economics ဘာသာရပ်အား အင်္ဂလိပ်စာနှင့် တွဲဖက် တက်ရောက်နိုင်
Singapore Institute of Management (SIM) ၏ Partner University တစ်ခုဖြစ်သော University of London မှ ချီးမြှင့်သည့် Diploma in Economics ဘာသာရပ်အား IELTS Band နည်း သူများအတွက် Skype Interview ဖြေဆို၍ အင်္ဂလိပ်စာနှင့်တွဲ၍ တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ IELTS Band 4.5 ရှိသ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အနေနှင့် ၂ဝ၁၁ စက်တင်ဘာ ၁ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၁ရက် အတွင်း လျှောက်ထားပြီး Skype Interview ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ Academic ဝင်ခွင့် လိုအပ်ချက်များကို ကျောင်းဘက်မှ ဆုံးဖြတ် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး.....
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဒီပလိုမာ- လုပ်သက် - လစာတပြိုင်တည်းရမည့် မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးအစီအစဉ်
မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်၏ တာဝန်ပေးချက်အရ၊ မလေးရှား အဆင့်မြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မလေးရှား လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးဌာန၊ မလေးရှား ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန တို့နှင့်အတူ သက်တမ်း(၂၅)နှစ်ရှိ ပုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ်ကြီး UCSI University တို့ ပူးပေါင်းပြီး Diploma in Hotel Management (A Work- Based Learning Approach) သင်တန်း ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ သာမန်စာ သင်ကြားသည့် ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကျောင်းစတက်သည့်နေ့သည် အလုပ်စတင် လုပ်သည့်နေ့ ဖြစ်သည်။ ကြယ်(၅)ပွင့် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်နေစဉ် တရားဝင် လစဉ် ခံစားငွေကိုလည်း.......
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Dimension International College မှ ULEC နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျောင်းဝင်ခွင့်နှင့် လိုအပ်ချက်များ အကြောင်း ဆွေးနွေးပေးမည်
Singapore နိုင်ငံမှ Dimension International College အား အခြေခံအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း Unique Life Education Centre မှ ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ College သည် Singapore နိုင်ငံတွင် Campus ပေါင်း (၃) ခုဖွင့်ထားပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့် ပညာရပ်များကို သင်ကြား ပို့ချလျက်ရှိသည်။ Main Campus အဖြစ် Lowland Road တွင်တည်ရှိပြီး Bukit Timah Campus နှင့် Orchard Campus တို့ကို ဖွင့်လှစ်ထား.... Read More �
စင်ကာပူနိုင်ငံ SAA မှ ACCA ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်
စင်ကာပူနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လတ်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင် အဖွဲ့အစည်း (Institute of Certified Public Accountants of Singapore ?ICPAS) မှဖွင့်လှစ်ထားသော Singapore Accountancy Academy Global Education (SAA-GE) ကျောင်းမှ ACCA Course အတွက် ပညာသင်ဆုကို လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း... Read More �
UK မှချီးမြှင့်သည့် MBA ဘွဲ့ကိုအခမဲ့အင်္ဂလိပ်စာတန်းနှင့်တွဲဖက်တက်ရောက်နိုင်
၂၀၁၁ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ United World School of Business (UWSB) တွင်ဖွင့်လှစ်မည် MBA နှင့်စီးပွားရေး ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ တက်ရောက်သူများအတွက် အခမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတန်းကို တပြိုင်နက်တွဲလျက် တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ MBA နှင့်စီးပွားရေး ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်... Read More �
သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များသို့ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်နိုင်သော Australian Degree Transfer Program
ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ ကူးပြောင်း တက်ရောက်နိုင်သော ဘာသာရပ်အား INTI University တွင် တက်ရောက်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ စီပွားရေးဘာသာရပ်များအား စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် ADTP (Commerce) အား ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပြီး စာသင်နှစ်မှာ တစ်နှစ်မှတစ်နှစ် ခွဲကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကာ သြစတြေးလျနှင့် နယူဇီလန်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်လိုသူများအတွက် ပိုမိုသင့်တော်ကြောင်း...... Read More �
City and Guilds (UK) အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းများဖွင့်မည်
TECH Training Centre မှအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်များဖြစ်သော Applied Diploma, Advanced Diploma သင်တန်းများကို ၁၂-၉-၂၀၁၁ နေ့တွင် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Applied Diploma နှင့် Diploma သင်တန်းများကို တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားသူများ တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်ပြီး GTC ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအနေနှင့် Advanced Diploma သင်တန်းများကို ဆက်လက် လေ့လာနိုင်ကြောင်း...... Read More �
စင်ကာပူနိုင်ငံ PSB Academy တွင် Pure IT Course ကိုသင်ကြားနိုင်တော့မည် စင်ကာပူနိုင်ငံ PSB Academy တွင် Pure IT Course ကို သင်ကြားနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ Course အတွက် Council for Private Education မှ approval ရယူရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း သိရသည်။ ယင်း Course မှာ Newzeland သို့ Foundation တက်ရောက်ပြီးပါကလည်း ပြောက်းရွှေ့ တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း၊ Newzeland တွင် ကျောင်းပြီးပါကလည်း ၆လ (သို့)၁နှစ်နေထိုင်ခွင့်...... Read More �
Diploma in Hotel Management of UCSI မြန်မာနိုင်ငံရေမြေသယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသည့်အပြင် အဖိုးတန်ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလေ့များ ထွန်းကားသည့်အလျောက် နိုင်ငံတကာမှကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုအခံရဆုံး ဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံ၏အရေးပါဆုံးသော အခန်းကဏ္ဍ၌ ရပ်တည်လျက်.... Read More �
Singapore နိုင်ငံရှိ PSB Academy ၏ Engineering တက်ရောက်ချင်သူကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အတွက်ရရှိနိုင်မည့် အထူးအခွင့်အရေး Singapore ရှိ Engineering ဘာသာရပ်တွင် အလွန်ကျော်ကြားသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်သည့် PSB Academy ၏ Bachelor of Engineering ကို တက်ရောက်လိုသူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် Internship (3)လဆင်းရမည်ဖြစ်ပြီး Internship ဆင်းနေစဉ်အတွင်း ၌ လည်း ဝင်ငွေရရှိ....
Singapore နိုင်ငံရှိ Kaplan တွင် MBA တက်ရောက်ချင်သူများအတွက် Scholarship လျှောက်ထားနိုင်သည့်အခွင့်အရေးအားထပ်မံရက်တိုးမြှင့် Kaplan တွင်တက်ရောက်ပြီး MURDOCH UNIVERSITY မှ ချီးမြှင့်သည့် MBA ဘွဲ့ကိုရယူလိုသူများအတွက် Scholarship Program ကိုစီစဉ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။အဆိုပါ Scholar Program အား September 2011 အတွက်ပေးအပ်ခဲ့ရာမှ January 2012 Intake အထိပါ ဆက်လက်ချီးမြှင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း.... Read More �
Nottingham University December Intake အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူ Nottingham University တွင် တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အတွက် December Intake ကို စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း.... Read More �
အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရှင်များ အတွက် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် မဟာဘွဲ့၊ ဘွဲ့လွန်ပညာ သင်ဆုများကို London School of Business And Finance မှ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ရာ အရည်အချင်း ပြည့်မှီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ပညာသင်ဆုမှာ အနာဂတ်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအတွက် ပြင်ဆင် လိုသူများ မိသားစုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြုစုပျိုးထောင်လိုသူ အမျိုးသမီးအတွက် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း.... Read More �
နယ်သာလန် နိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် Environmental Project ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆုတံဆိပ်များရရှိခဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ရက် မှ ၃၀ရက် အထိ နယ်သာလန်နိုင်ငံ Utrecht မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော 3rd INESPO (International Environment Scientific Project Olympiad ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆုတံဆိပ်များ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြောင်း.... Read More �
ပညာဒါနပြုမည့် စင်္ကာပူအစိုးရအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ Future Way Co.,Ltd မှ ပညာဒါနပြုမည့် စကာင်္ပူအစိုးရအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ မြန်မာနိုင်ငံမှ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များကို တက်ရောက် သင်ကြားရန် စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် စကာင်္ပူအစိုးရကျောင်း၏ ၂၀၁၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ဝင်ခွင့်ကို လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း.... Read More �
ယခုအခါကျောင်းသားများနှင့် မိဘအများစုမှာ နိုင်ငံတကာ ပညာရေးအတွက် ရွေးချယ်စရာ လမ်းကြောင်းများစွာရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။
.... Read More �
One Year Edu Trust မှ4? Years Edu Trust သို့တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားသော Kaplan Higher Education Academy
The Washington Post Company ၏ နောက်ခံဖြင့် ရပ်တည်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံပေါင်းငါးရာကျော်တွင် နှစ်စဉ်ကျောင်းသားပေါင်း တစ်သန်းကျော်ကို ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီအလိုက် ၎င်းတို့၏ ပညာရေး၊ အနာဂတ်အခွင့်အလမ်း အောင်မြင်မှုများတစ်ပြိုင်နက် ရရှိဆွတ်ခူးစေရန်အတွက် အကူအညီ ပေးလျက်ရှိ.... Read More �
Diploma in Electrical & Electronics Engineering (DEEE) နှင့် Diploma in Mechanical Engineering Design (DMED) ကို တရားဝင် စတင်သင်ကြားခြင်း
PSB Academy တွင် ဘာသာရပ်အသစ်ဖြစ်သော Engineering Diploma Programs နှစ်ခုကို လာမည့် (အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်) ကျောင်းဖွင့်ရက်တွင် စတင်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း.... Read More �
UK ရှိ Bellerys College တွင် Diploma in Business Management တက်ရောက်လိုသူများအတွက်ရရှိနိုင်မည့် (Special Bursary) ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး
UK ၏ အထင်ကရမြို့များဖြစ်ကြသော Brighton, Cambridge, London နှင့် Oxford မြို့များတွင်တည်ရှိသော Bellerbys College မှ Diploma တက်ရောက်မည့် ထူးချွန်သည့် ကျောင်းသားများအတွက် Bursary ကို STUDY ABROAD Information Centre မှ တဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း....
EF Brittan College အတွက်September Intake စတင်လျှောက်ထားနိုင် UK ရှိ ကောလိပ်များအနက် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်သက်တမ်းရှိသော ကောလိပ်များအနက် EF Brittan College တွင်တက်ရောက်လိုသူများ September Intake ကိုစတင်လျှောက်ထားနိင်ပြီဖြစ်ကြောင်း....
University College Dublin, Ireland မှကျောင်းဖွင့်ချိန်ကာလကြောင်းရွေ့မည် University College Dublin, Ireland မှကျောင်းဖွင့်ချိန်ကို စက်တင်ဘာလမှ အောက်တိုဘာလသို့ ပြောင်းရွေ့သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း....
အင်္ဂလန်နိင်ငံအသိအမှတ်ပြု အင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာသင်တန်းကိုပြည်တွင်းရှိ Gallant Training Center တွင်တက်ရောက်သင်ကြား နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
Kaplan တွင်တက်ရောက်လိုသောကျောင်းသားများ Student Visa Processing အချိန်လျော့ကျ
စင်ကာပူနိင်ငံ Kaplan Higher Education Academyသည် Edutrust သက်တမ်းတစ်နှစ်မှ လေးနှစ် သို့ ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လ၂၁ရက်တွင် တိုးမြှင့်ရရှိကြောင်း....
Hong Kong အစိုးရတက္ကသိုလ်မှချီးမြှင့်သည် MBA ဘွဲ့ကို ပြည်တွင်းတွင် တက်ရောက်ယူနိင်
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော The Open University of Hong kong (OUHK)သည် Hong kong အစိုးရမှဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်....
အလုပ်ခွင်အခြေပြု Hotel Management Diploma ကို UCSI University မှချီးမြှင့်မည် အလုပ်ခွင်အခြေပြု Hotel Management Diploma in Base Management / WBLDEM) ကိုမလေးရှားနိုင်ငံရှိ UCSI University တွင်တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း....
Nanyang Institute of Management မှ ဖွင့်လှစ်သော ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ဘွဲ့လွန်သင်တန်း
ထိုသင်တန်းကိုတက်ရောက်လိုသူများသည် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို စိတ်ပါဝင်စားပြီး အနည်းဆုံးဘွဲ့တစ်ခုရရှိထားရမည်။ ၀န်ဆောင်မှု (Services) လိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူများအတွက် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းဖြစ်....
University of Surrey မှ ဘွဲ့ရကျောင်းသားများ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်လွယ်ကူ
University of Surrey သည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဘွဲ့များကို သင်ကြားပို့ချပေးနေသော UK ၏ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၎င်း၏ သုတေသနပြုလုပ်ငန်းများနှင့် သင်ကြားမှုနည်းစနစ်များကြောင့် ဂုဏ်သတင်းမှာ အလွန်ပင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြား....
SEGI University College, Malaysia တွင် Master of Education တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ပါသည်
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း (၃ဝ) ကျော်ကြာမြင့်ပြီးဖြစ်သော SEGI Education Group သည် ဆေးပညာဘွဲ့မှအစ၊ သူနာပြု၊ မျက်စိအထူးပြု၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေး၊ စာရင်းအင်း၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဒီဇိုင်း၊ တေးဂီတ၊ ဓါတ်ပုံပညာ၊ ဗီဒီယိုနှင့် ကာတွန်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဆိုင်ရာ၊ ပညာရေး၊ ခလေးလူငယ်ဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရပ်ပေါင်းမြောက်များစွာတို့ကို SEGI ကျောင်းခွဲများရှိသော Kuala Lumpur, Penang, Sarawak, Seri Kembangan နှင့် Pulau Indah တို့တွင် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိ....
Malaysia နိုင်ငံ Nalai University တွင် တက်ရောက်နိုင်သည့် Aircraft Maintenance Engineering Course
Aircraft Maintenance staff အဖြစ် Air carrier Industry များတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Nilai University တွင် Aircraft Maintenance Engineering ဒီပလိုမာသင်တန်း တက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း....
စင်္ကာပူနိုင်ငံ မှတဆင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ် (၆) ကျောင်းသို့ဆက်လက်တက်ရောက်နိင်မည့် အမေရိကန် Pathway Program အသစ်
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ တဆင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကြီးများကို ဆက်လက်ပညာသင်ယူနိုင်မည့် Diploma in General Studies ? US Pathway Program ကို Kaplan ၏ Campus အသစ်ဖြစ်သော Wilkie Edge တွင် ယခုလာမည့်အောက် တိုဘာစာ သင်နှစ်မှ စတင်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
သြစတြေးလျနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ အကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သော Curtin University သို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် အခွင့်အလမ်း
နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များသို့ သွားရောက်သင်ကြားလိုသော ကျောင်းသားများအတွက် University Foundation Program များကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျှက်ရှိ....
ဆေးပညာသုတေသန၊ ဆေးသိပ္ပံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် ထုတ်လုပ်မှု နယ်ပယ်များတွင် အလုပ်အခွင့်အလမ်းကောင်းများကို လမ်းဖွင့်ပေးသည့် UCSI University မှ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် မဟာသိပံ္ပဘွဲ့
ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် နယ်ပယ်တွင် ဆေးပညာသုတေသနပြုခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည်။ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးမှသည် လူ့အသက်ကယ်ဆေး အထိ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ လူသားအားလုံး၏ ဘ၀များကို ကောင်းသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိစေသည့်....
Singapore တွင် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Engineering ဘာသာရပ်အား တက်ရောက် ချင်သူများအတွက် STUDY ABROAD မှ ကျောင်းလျှောက်ပြီး Scholar လျှောက်ထားနိုင်။ Management Development Institute of Singapore (MDIS) တွင် Engineering ဘာသာရပ်အားတက်ရောက်ချင်သူများအနေဖြင့် September Intake အတွက် STUDY ABROAD Information Centre မှ လျှောက်လွှာများကိုစတင် လျှောက်ထားပေးနေပြီ ဖြစ်....
"နိုင်ငံတကာကျောင်းဝင်ခွင့်များအတွက် အေဂျင်စီများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များ?
နိုင်ငံတကာပညာရေးကို ကျောင်းသူကျောင်းသားအများအပြားစိတ်ဝင်စားလာကြသည့်အလျောက်၊ အေဂျင်စီများနှင့်် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း....
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများ၏ Middle Management များတွင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဦးတည်ချက်ဖြင့် သင်ကြားပေးမည့် စီမံ ခန့်ခွဲမှု့ ဘွဲ့ လွန်ဒီပလိုမာ?(l)
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ The National Body for Sales and Marketing ကျောင်းဖြစ်သော Marketing Institute of Singapore မှ စီမံခန့် ခွဲမှု့ နယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသော....
UK, US, Canada နှင့် Australia နိုင်ငံများ တွင် ပညာသင်ကြားမည့် သူများအား EF International Academy မှ ပညာသင်ဆုများ ချီးမြှင့်မည် UK, US, Canada နှင့် Australia နိုင်ငံများတွင် ပညာသင်ကြားလိုသော ထူးချွန်ထက်မြက်သည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား UK ရှိ EF International Academy မှ ပညာသင်ဆုများ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများရှိနိုင်မည့် Nanyang Institute of Management Diploma in Construction Engineering ဆောက်လုပ်ရေးသည် နေရာအနှံ့တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော နည်းပညာဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ဆောက်လုပ်ရေး အရာရှိများအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးကောင်းမွန်ကြောင်း....
စင်္ကာပူ PSB Academy မှ GCE ?O? Level ကျောင်းသားများအတွက် စစ်ဆေးပေးမည့် English Placement Test
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များတွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သော PSB Academy သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Best Education Experience အတွက် the First Singapore Experience Award ဆုကို ရရှိထား....
?ဆရာများနှင့် သင်တန်းနည်းပြများအတွက် UNIVERSITY OF CAMBRIDGE မှ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာကို တက်ရောက်နိုင်ပြီ?
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် သင်တန်းနည်းပြများအနေဖြင့် UK ရှိ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE မှ ချီးမြှင့်သော နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု သင်ကြားမှုဒီပလိုမာကို မလေးရှားနိုင်ငံရှိ KDU University College တွင် တက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း....
ယူကေတက္ကသိုလ် (University of Leicester International Study Centre & Lancaster University International Study Centre) ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးသတင်း
ယူကေနိုင်ငံ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် Universities များ၏ International Study Centre တစ်ခုဖြစ်သော Study Group မှ ယူကေတက္ကသိုလ် (University of Leicester & Lancaster University) တို့မှပေးသော ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး စတာလင်ပေါင် ၃၅၀၀ ကို STUDY ABROAD Information Centre တွင် စတင်လျှောက်ထားနိုင်....
International Air Transport Association (IATA) မှချီးမြှင့်မည့် Airline Cabin Crew Certificate ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်တက်ရောက်သင်ယူနိုင်
၁၉၁၉ တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့လေကြောင်းလိုင်း ၂၃၀ ကျော်ကိုကိုယ်စားပြုသော International Air Transport Association မှ ပေးအပ်မည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Airline Cabin Crew Certificate ကိုတက်ရောက် သင်ယူရန်လျှောက်ထားနိုင်.....
ဆယ်တန်းအောင်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ပညာများဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန် အထင်ကရနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့ UK, USA, Australia အစရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ဆေးပညာရပ်၊ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်၊ စီးပွားရေးဘာသာရပ်၊ အစရှိသည့် ဘာသာရပ်များကို မိမိတို့နှစ်သက်သည့် တက္ကသိုလ်တွေမှာ သင်ကြားချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသား/သူများ အတွက်?.....
?မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားများ ရရှိနိုင်မည့် ပညာနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်းသစ်များ? ၂၁ ရာစု၏ ကမ္ဘာကြီး၏နည်းပညာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှု မြန်ဆန်ခြင်းကို အခြေခံပြီး တက္ကသိုလ်အချင်းချင်း သင်ကြားပို့ချနိုင်မှုစွမ်းအား ပြိုင်ဆိုင်ကြသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားကျောင်းသား အများဆုံးရရှိသည့်နိုင်ငံမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်ကဒုတိယလိုက်သည်။ သြစတြေးလျနှင့် ကနေဒါက တတိယနေရာကို ပြိုင်ဆိုင်နေဆဲ?.....
မလေးရှား INTI International University မှ နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ပညာရပ်များ မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် INTI International University သည် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့် ပညာရပ်များကို undergraduate မှစ၍ Doctoral Degree တန်းများအထိ တက်ရောက်နိုင်ရန် နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသားများအား ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မှာ ယခုဆိုလျှင် နှစ်ပေါင်း (၂၅)နှစ်ခန့် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ?.....
စင်္ကာပူအစိုးရ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းဝင်ခွင့်အား ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ကြေး အခမဲ့အပြင် Exam Centre ကြေးပါ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိရန် Future Way စီစဉ် ၁ဝ တန်းဖြေဆိုအောင်မြင်ထားသူ ကျောင်းသား၊သူများအနေဖြင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များ ကို အဓိကထား သင်ကြားပေးသည့် အစိုးရအင်ဂျင်နီယာကျောင်း BCA Academy ၏ October Intake ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအား စရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ဖြေဆိုနိုင်ရန်?.....
Singapore Institute of Management (SIM) မှ October Intake အတွက် လျှောက်လွှာစတင် လက်ခံ Singapore နိုင်ငံ၏ The First Private ဖြစ်ပြီး Singapore နိုင်ငံအစိုးရ၏ အသိအမှတ်ပြု Edu Trust ရရှိထားသော Singapore Institute of Management (SIM) မှ October လ Intake အတွက် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ SIM ကို စိတ်ပါဝင်စားသူ ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းတာဝန်ခံ Ms.Julie ကိုယ်တိုင် July ၈ ရက်နေ့ ညနေ 4:00 ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း?.....
MDIS တွင် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၁ မှစ၍ SCHOOL OF DESIGN ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မည် ဘာသာရပ် MAJORS များစုံလင်လှသော MDIS တွင် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ မှစ၍ SCHOOL OF DESIGN ကို တိုးချဲ့ကာ စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ MDIS မှ SCHOOL OF DESIGN သည် UK နိုင်ငံ NOTTINGHAM TREND UNIVERSITY နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး?.....
Semester တိုင်းအတွက် Scholarship နှစ်ဆုစီ ချီးမြှင့်မည့် UK, USA, Australia, Canada နှင့် Singapore နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်ကြီးများ
UK, USA, Australia, Canada နှင့် Singapore နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် Diploma, Advanced Diploma နှင့် Degree Program များကို တက်ရောက်သင်ယူမည့် ကျောင်းသားများအတွက် Semester တစ်ခုပြီးတိုင်း Scholarship ရွေးချယ်ပေးအပ်မည့် အစီအစဉ်?.....
Kaplan Singapore မှ Murdouch MBA ဘွဲ့အား Scholarship ချီးမြှင့်မည်
Kaplan Singapore မှ Murdouch MBAဘွဲ့အား ပညာသင်ဆုထောက်ပံ့ချီးမြှင့်မည်။
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ?.....
Coventry University (UK) ၏ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို စင်ကာပူတွင် နှစ်နှစ်ခွဲတက်ရောက်ရုံဖြင့် ရယူနိုင်
အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များ သင်ကြားရာတွင် နာမည်ကြီးသည့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Coventry University ၏ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Auston Institute of Management တွင် နှစ်နှစ်ခွဲတက်ရောက်ရုံဖြင့် ရယူနိုင်ကြောင်း...
University of Cambridge မှ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုသင်ကြားမှု ဒီပလိုမာကို မလေးရှားနိုင်ငံတွင် တက်ရောက်နိုင်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံမှဆရာ/ ဆရာမများနှင့် သင်တန်းနည်းပြများ အနေဖြင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Cambridge မှ ချီးမြှင့်သော နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု သင်ကြားမှုဒီပလိုမာကို မလေးရှားနိုင်ငံရှိ KDU University College တွင် တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း...
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများလေ့လာသင်ယူနိုင်မည့် Biotechnology
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Management Development Institute of Singapore (MDIS) သည် UK ရှိ Northumbria University နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ BSc (Hons) in Biotechnology ဘာသာရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ယခုနှစ် သြဂုတ်လမှ စတင် ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်သင်ကြား ပို့ချပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း CROWN Education မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြား...
Capacity Development Institute of Myanmar (Tip Top) မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ဂုဏ်ထူးရှင်များကို ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်မည်
၂၀၁၀/ ၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ကြသော ကျောင်းသား/ သူများကို Tip Top: Capacity Development Institute of Myanmar မှ ပညာသင်ဆုများ ချီးမြှင့်မည်...
Raffles International College Cambodia မှ ဘာသာရပ်အချို့ကျောင်းလခတက် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော Raffles International College မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက် ဘာသာရပ်အချို့ ကျောင်းလခတက်သွားကြောင်း...
PSB Academy မှ Wollongong University သို့ ဝင်ခွင့်ရကျောင်းသားများအတွက် အထူးအစီအစဉ် Samsung Galaxy Tab ရရှိမည့် အခွင့်အရေး
Wollongong University သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ Research Universities များထဲတွင် ထိပ်တန်း 2% စာရင်းဝင်သော University တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း University ၏ ပညာရေးအောင်မြင်မှု သတ်မှတ်ချက်မှာ 5-Star အဆင့်ရှိသဖြင့် အလုပ်အကိုင်ကောင်းများရရှိဖို့...
MDIS တွင် ပညာသင်ကြားလိုသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် အထူးသတင်းကောင်း
(30.12.2010) ခုနှစ်တွင် Edu Trust (4) နှစ်ရရှိခဲ့သော MDIS မှ Scholar Program များရရှိနိုင်သလို ဘာသာရပ်များ အနေဖြင့်လည်း တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
?ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Kaplan နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တက္ကသိုလ်များတွင် ရွေးချယ်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားနိုင်မည့် Global Diploma ကိုစတင် သင်ယူနိုင်တော့မည်? Kaplan Higher Education Academy သည် ကမ္ဘာကျော် The Washington Post သတင်းစာနှင့် News Week မဂ္ဂဇင်းကိုပိုင်ဆိုင်သော အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးဘဏ္ဍာရေးနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး အဖွဲ့အစည်းများတွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည့်...
Poly ၀င်ခွင့်မရသူများအတွက် Nanyang Institute မှ ထပ်မံဖွင့်လှစ်သည့် ?Diploma In Construction Engineering?
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Nanyang Institute တွင် Management Diploma in Construction Engineering ကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း...
Nottingham University မှ September Intake အတွက်လျှောက်လွှာခေါ်ယူ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Nottingham University Intake အတွက်လျှောက်လွှာများ စတင်ခေါ်ယူလျက်ရှိရာ တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အနေနှင့် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း...
MDIS တွင် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်လျှောက်နိုင် MDIS (Management Development Institute Singapore) တွင် Engineering ဘာသာရပ် စိတ်ဝင်စားသူများ၊ Electrical and Electronic Engineering ဘာသာရပ်များကို စက်တင်ဘာ ကျောင်းဝင်ခွင့်အမှီ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း....
University of Melbourne သို့ လျှောက်ထားနိုင်
သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ University of Melbourne သို့ ဘွဲ့ကြိုနှင့် မဟာဘွဲ့သင်တန်းများ တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားများသည် ဇူလိုင်လ ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း....
သြစတြေးလျ Bachelor of Commerce သင်တန်းလျှောက်ထားနိုင် သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ University of Wollongong က ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့် Bachelor of Commerce သင်တန်းကို တက်ရောက်လိုသူများ မေလ ၆ ရက်နေ့မှ မေလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း....
ဒုတိယနှစ်သို့တိုက်ရိုက် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသော ကျောင်းသားများ PSB Academy မှ အထူးဆုချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ Singapore နိုင်ငံ The Best Education Experience Award ? 2010, Top ?3preferred Private Education Institution for Diploma Programmes (2009) ရရှိထားသော PSB Academy တွင် University of Newcastle (UON) မှ ဘာသာရပ်များအပြင်....
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Kaplan နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တက္ကသိုလ်များတွင်ရွေးချယ်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားနိုင်မည့် Global Diploma ကိုစတင် သင်ယူနိုင်တော့မည်? Kaplan Higher Education Academy သည် ကမ္ဘာကျော် The Washington Post သတင်းစာနှင့် News Week မဂ္ဂဇင်းကိုပိုင်ဆိုင်သော အမေရိကန်နိုင်၏ အကြီးဆုံး ဘဏ္ဍာရေးနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး အဖွဲ့အစည်းများ တွင်တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်သည့် ....
Unitedworld School of Business မှ ရာနှုန်းပြည့် ပညာသင်ဆုများချီးမြှင့်မည်
လာမည့် (၂၀၁၁)ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် စီးပွားရေးဒီပလိုမာကို တက်ရောက်မည့်ထူးချွှန်သော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား Unitedworld School of Business မှ ရာနှုန်းပြည့် ပညာသင်ဆု(၁)ဆုနှင့် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ပညာသင်ဆု(၂)ဆုကို ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီး (၂၀၁၁) ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ Synergy Education တွင် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း....
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Oxford, London, Cambridge မြို့ကြီးများရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များသို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အခွင့်အလမ်း
နိုင်ငံတက္ကသိုလ်များသို့ သွားရောက်သင်ကြားလိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် University Foundation Program များကိုဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျှက်ရှိ....
UK တွင် Tourism နှင့် Hospitality ဘာသာရပ်ဖြင့် အခွင့်အလမ်းပိုမိုရှိလာနိုင်
UK ၏ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုစတင်နေသည့် အတွက် Tourism နှင့် Hospitality ဘာသာရပ်အား စိတ်ပါဝင်စားသူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် အထူးအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများပေါ်များလာကြောင်း....
PSB Academy မှ 2011 အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ကျောင်းဝင်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဖြေဆိုခွင့် အစီအစဉ်နှစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ကြေငြာ
?Best Singapore Experience Award 2010? ဆုရရှိထားသော PSB Academy ကျောင်းသည် ယခုအခါတွင်လည်း ဒုတိယအကြိမ်အစီအစဉ်အနေဖြင့် GCE ?O? Level / IGCSE ကျောင်းသားများအတွက်သာ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း....
Singapore နိုင်ငံ Shelton College မှ Scholarship များပေးအပ်နေ စင်္ကာပူနိုင်ငံ Shelton College မှ မြန်မာတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသား/သူများအတွက် 30 to 100 % Scholarship Exam Test ကို ၀င်ရောက်ဖြေဆိုလိုသူများအနေဖြင့် OSM Education Centre (Myanmar) တွင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း....
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု့ဆိုင်ရာ စီမံခန့် ခွဲမှု့ ဘွဲလွန် (MSc in Health Care Management) ဘာသာရပ်၊ BioTechnology ဘာသာရပ် နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း
BioTechnology ဘာသာရပ်၊ ကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှု့ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု့ဘွဲ့လွန် (MSc in Health Care Management) ဘာသာရပ် နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း....
Taylor?s University Open Day တွင် ကျောင်းလျှောက်သူများ MSI ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှ အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း
Brand Excellent Award 2008 နှင့် Tier (5) Excellent Award (SETARA AWARD 2009)၊ Malaysia နိုင်ငံ၏ အထင်ရှားဆုံး ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်/ တက္ကသိုလ်များတွင် Doctor Job?s Students? Choice Award 2009 ကိုရရှိထားပြီး Malaysia Higher Education နယ်ပယ်တွင် (၄၈) နှစ်ကြာ တရားဝင် ရပ်တည်ခဲ့သော ကျောင်းဖြစ်သည့်....
သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွက် MDIS မှ ကျောင်းအပ်ရန် လျှောက်လွှာများစတင်လက်ခံ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Management Development Institute of Singapore (MDIS) မှ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလများအတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာများကို စတင်ခေါ်ယူနေပြီဖြစ်ကြောင်း....
Shelton College မှ ရာနှုန်းပြည့် ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်မည် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Shelton အထက်တန်းကျောင်းနှင့် Shelton ကောလိပ်တို့တွင် တက်ရောက်မည့် ထူးချွန်သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပညာသင်ဆုအဖြစ် ကျောင်းလခ၏ (၃၀%) မှ (၁၀၀%) အထိချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ လျှောက်ထားနိုင်မည့် FulBright Scholarship
မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့တွင် ရှိသည့် အမေရိကန်သံရုံးမှ ၂၀၁၂-၁၀၁၃ ခုနှစ်ပညာသင်နှစ် အတွက် Fulbright Foreign Student Program ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက်.....
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် University of Newcastle မှ ဘွဲ့လွန်အောင်လက်မှတ်များရယူနိုင် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ PSB Academy နှင့် UON Australia တွင် University of Newcastle (UON) မှ Master of Business နှင့် Graduate Certificate in Business Administration ဘွဲ့လွန် Program နှစ်ခုကို သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Management Development Institute of Singapore (MDIS) အတွက်ပညာသင်ဆုများစတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ MDIS တွင် Information Technology, Business, Life Science, Media & Communication, Tourism & Hospitality, Engineering စသည့် Program များကို Certificate Level မှ စတင်တက်ရောက်နိုင်ပြီး.....
Australia တွင် ပညာသင်ကြားလိုသူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Deakin University ၏ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်သည့် အထူးအခွင့်အရေး Australia နိုင်ငံ၏ Navitas အဖွဲ့ဝင်ကျောင်းများတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော MIBT မှ 25% ပညာသင်ဆု ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အထူးသတင်းကောင်းပါး.....
JCU (Singapore) ၏ စီးပွားရေးမဟာဘွဲ့ကို အချိန်ကာလ တစ်နှစ်ဖြင့်သင်ကြားနိုင် James Cook University (Singapore) ၏ စီးပွားရေးမဟာဘွဲ့ကို အချိန်ကာလတစ်နှစ်ဖြင့် တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ကြောင်း ULEC မှသိရသည်။ အဆိုပါ စီးပွားရေးမဟာဘွဲ့ကို Business, Computing, Engineering, Medicine စသောဘွဲ့များအပြင် အခြားမည်သည့် ဘွဲ့ရမဆို တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး.....
Taylor?s University သတင်းစာပညာဘွဲ့ တက်ရောက်နိုင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် သတင်းပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသူများအတွက် Taylor?s University ၏ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ဘာသာရပ်သစ်ဖြစ်သော Bachelor of Journalism ဘွဲ့သင်တန်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ လျှောက်ထား တက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း.....
စင်္ကာပူ၏ ပထမဆုံး Libral Arts College ကို ကမ္ဘာကျော်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော Yale နှင့် NUS တို့ ပူးပေါင်း၍ စင်္ကာပူတွင်ဖွင်လှစ်
ကောလိပ်တစ်ခု၏ အဆောင်အယောင်များ အပြည့်အစုံပါဝင်သော၊ စင်္ကာပူ၏ ပထမဆုံး Libral Arts College ကို ကမ္ဘာကျော်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော Yale နှင့် NUS တို့ ပူးပေါင်း၍ စင်္ကာပူတွင် ဖွင်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း CROWN Education မှတာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးကပြောကြားပါသည်၊၊ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်ကို စင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်နှင့် ကမ္ဘာကျော် ယေးလ်တက္ကသိုလ်တို့ မတ်လ (၃၁) နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပထမဆုံးအသုတ် ကျောင်းသား ၁၅၀ ကို ၂၀၁၃ တွင် စတင်လက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကာ နောက်နှစ်များအတွက် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ၂၅၀ ခန့် လက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း.....
Australia နိုင်ငံ၏ TAFE Advanced Diploma of Accounting ကျောင်းဝင်ခွင့်များခေါ်ယူ Australia ၏ အကြီးမားဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို ပို့ချလျှက်ရှိသော TAFE NSW အား ကျောင်းသားများသည် ယခုအခါစရိတ်စက သက်သာစွာဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် သွားရောက်ပညာသင်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း.....
အတတ်ပညာများထဲမှ ဘဝအတွက် စိတ်ချရသော အတတ်ပညာတစ်ခုကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ဆောင်လုပ်ရေးနည်းပညာကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဝင်ငွေကောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်.....
PSB Academy မှ Application Fee Wave ပေးအပ်မည်
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ PSB Academy တွင် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအတွက် Application Fee Wave ကို ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ရာ ဧပြီ ၁ ရက်မှ ၁၁ ရက်အတွင်းလျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း.....
စင်ကာပူအစိုးရ အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာသင်တန်းကျောင်း BCA Academy ကို 10 တန်းဖြေဆိုပြီးသူများကို ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ပြုမည်
၂၀၁၀/၁၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုကြမည့် ၁၀ တန်းကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် စင်ကာပူအစိုးရ အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာသင်တန်းကျောင်း BCA Academy ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုနိုင်ကြောင်း.....
မလေးရှား INTI University မှ Engineering ဘာသာရပ်များ လျှောက်ထားနိုင်
ကမ္ဘာ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အကောင်းဆုံးစာရင်းတွင် ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်သော Engineering ဘာသာရပ်ကို ယခုလက်ရှိနောက်ပိုင်းတွင် ကျောင်းသားအများစု စိတ်ဝင်စားလာကြ......
နိုင်ငံတကာ Universities များတွင် သွားရောက်ပညာသင်လိုသူများအတွက် Pre- University Studies Program နှင့် သင်္ကြန်အထူးအစီအစဉ် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများနှင့် တန်းတူပညာသင်ယူရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့လိုသူများ၊ Singapore Poly Australia TAFE ကျောင်းများသို့ ၀င်ခွင့်ရလိုသူများ၊ GCE ?A? Level ကို Scholarship ရလိုသူများ၊ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် ဆေးကျောင်းနှင့် အခြားဘာသာရပ်များ သင်ယူတတ်မြောက် လိုသူများ၊ ပညာသင်ဆု/ ထောက့်ပံ့ကြေးရလိုသူများအတွက် Ideal For Home College Style အတိုင်းသင်ကြားခွင့်ရခြင်း၊ IGCSE ကို နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော် အတွေ့အကြုံရှိ ၀ါရင့် Native Lecturer နှင့် Local Lecturer များမှ ပူးပေါင်းသင်ကြားပေးခြင်း......
PSB Academy မှ 2011 အတွက် ကျောင်းဝင်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဖြေဆိုခွင့်အစီအစဉ် နှစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း Singapore Experience Award 2010 ဆုရရှိထားသော PSB Academy ကျောင်းသည်ယခုအခါ 2011 ပထမဆုံးအစီအစဉ်သစ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် GCE ?O? Level/ IGCSE ကျောင်းသားများအတွက်သာ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကို ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း......
?London School of Commerce မှ မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသူကျောင်းသားအများအတွက် ပေးအပ်မည့် အထူးပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ဆွေးနွေးပွဲ? အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ London School of Commerce နှင့် CROWN Education တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်မှု့ ဖြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အတွက်၊ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရွေးချယ်ပေးအပ်မည့်အစီအစဉ်...
ဂျီစီအီးအိုနှင့် အိုင်ဂျီစီအက်စ်အီး အင်္ဂလိပ်စာရမှတ် နည်းသူများအတွက် တက္ကသိုလ် Foundation ပရိုဂရမ်သို့ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲလာရောက်စစ်ဆေးပေးမည်
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် GCE, iGCSE စာမေးပွဲများဝင် ရောက်ဖြေ ဆိုရာတွင်၊ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းအများစုသို့ဝင်ခွင့်ရရှိရန်၊ ယေဘူယျအားဖြင့် (၅) ဘာသာ ဖြေဆိုရန်လိုအပ်ပြီး၊ ဘာသာရပ်တိုင်းတွင် Grade (C) ဖြင့်အောင်မြင်ရန် လိုအပ်....
BCA Academy ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများအား မှတ်ပုံတင်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် ဖြေဆိုနိုင်မည် စင်ကာပူအစိုးရကျောင်း BCA Academy ၏ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင်အဖြစ် ကြီးမှူးကျင်းပလျက်ရှိသော Future Way Co.,Ltd မှ ကျောင်းမှတ်ပုံ တင်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့် ပထမဦးဆုံး အကြိမ်စစ်ဆေးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
သင်္ကြန်ကာလ English Summer Camp Program ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သွားရောက်သင်ကြားနိုင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပဉ္စမတန်းမှ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်တက်ရောက်လျက်ရှိသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း English Summer Camp Program ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့တွင် သွားရောက် သင်ကြားနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း....
Nanyang Institute of Management ၏ Construction Engineering ဘာသာရပ်အတွက် One to One Counseling ကို MSI ရုံးခန်းတွင်ပြုလုပ်မည် Singapore နိုင်ငံရှိ ERC Institute တွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားရင်း USA နှင့် New Zealand နိုင်ငံများသို့သွားရောက်လေ့လာ၍ working Experience ရယူနိုင်သည့် Program သစ်တစ်ရပ် စီစဉ်ထားကြောင်း....
ERC Institute တွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသူကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် သတင်းကောင်း
Singapore နိုင်ငံရှိ ERC Institute တွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားရင်း USA နှင့် New Zealand နိုင်ငံများသို့သွားရောက်လေ့လာ၍ working Experience ရယူနိုင်သည့် Program သစ်တစ်ရပ် စီစဉ်ထားကြောင်း....
Australia နိုင်ငံသို့ တိုက်ရိုက်ကူးပြောင်းတက်ရောက်နိုင်သော Australian Degree Transfer Program
ယခုလိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်ကြီးများရှိ တက္ကသိုလ်များကို သွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသူများလည်း တိုးတက်လျှက်ရှိနေသည်။ ထိုကဲ့သို့ရွေးချယ်ရာမှာ UK ၊ USA ၊ AUS အစရှိသည့် နိုင်ငံများမှ ဘွဲ့ကိုရွေးချယ်တက်ရောက်လိုသူများ များပြားလာတာကို တွေ့ရ....
စင်္ကာပူအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ S-pass, EP အခြေခံလစာများ တိုးတက် ပြောင်းလဲသတ်မှတ် ယခုနှစ် ဂျူလိုင်မှစတင်၍ စင်္ကာပူအလုပ်သမားဝန်ကြီး အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာကျွမ်း ကျင်လုပ်သားများ အပါအ၀င်၊ ပြည်တွင်း (အချိန်ပြည့်) လုပ်သားများ၏ အခြေခံလစာများကို တိုးမြှင့်သတ်မှတ် လိုက်ကြောင်း....
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကျောင်းသားပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် ငြင်းပယ်မခံရရန် သေချာစွာပြင်ဆင်သင့်
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကျောင်းသားပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် ငြင်းပယ်မခံရရန် သတိထားသင့်ပြီးလျှောက်ထားရာတွင်လည်း ပညာအရည်အချင်းသည် သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းဖြင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါကလည်း ငြင်းပယ်ခံရနိုင်ကြောင်း....
Cambridge International Examination မှ အသိအမှတ်ပြု Accounting & Finance နှင့် HR Management ဒီပလိုမာ၊ ပရိုဂရမ်အသစ်များ PSB Academy မှပို့ ချပေးသွားမည် ၂၀၁၀ မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် သြစတြေးလျ၊ ယူကေတက္ကသိုလ်များသို့ ဆက်လက်လျှောက်ထား တက်ရောက်နိုင်သည့် ဒီပလိုမာပရိုဂရမ်များ ပို့ချပေးခဲ့ရာ....
UK ဗီဇာ လျောက်ထားရမည့် စနစ်ကို Online Visa Application Form တင်ရမည့် စနစ်သို့စတင်ကျင့်သုံးမည်
မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ UK ဗီဇာ လျောက်ထားရမည့် စနစ်ကို Online Visa Application Form တင်ရမည့် စနစ်သို့စတင်ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း....
University of Wales မှ ချီးမြှင့်သည့် MBA တက်ရောက်နိုင် STI Education သည် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Logistic Management, Supply Chain Management, Human Resources Management, Teacher Training, Hospitality & Tourism Management, Banking & Finance, Business Management စသည့် ဒီပလိုမာနှင့် အဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာ ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုး သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိ.....
University of Sunderland မှ ချီးမြှင့်သည့် BA (Hons) နောက်ဆုံးနှစ် သင်ယူနိုင်
STI Education သည် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Logistics Management, Supply Chain Management, Human Resources Management, Teacher Training, Hospitality & Tourism Management, Banking & Finance, Business Management စသည့် ဒီပလိုမာနှင့် အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာဘာသာရပ်အမျိုးမျိုး သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိ.....
Taylor?s University College (Malaysia) မှ GCE ?A? Level တွင်ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ထားသူများအား Scholarship ပေးမည်
Taylor?s University College (Malaysia) မှ GCEA ?A? Level တွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင် ထားသော မြန်မာကျောင်းသားများအား ထိုက်တန်သော Scholarship ပေးမည်ဟု OSM Education Centre မှသိရှိရ......
စင်္ကာပူအစိုးရကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်းသင်တန်းများအတွက် ၀င်ခွင့်လျောက်လွှာများစတင်ခေါ်ယူ စင်္ကာပူအစိုးရမူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းများသို့ ၀င်ခွင့်ရရှိလိုသည့် ခလေးများသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် စစ်ဆေးမည့်၊ AEIS စာမေးပွဲ (Admission Exercise for International Students) ကိုဖြေဆိုအောင်မြင်ရန်......
MSI မှ (Non Profit) စနစ်ဖြင့် အမေရိကန်ပညာရေးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံလေ့လာရေးခရီးစဉ်ကို ပထမဦးဆုံး ကြီးမှူးဆောင်ရွက်ခြင်း
Myanmar Search International (MSI) နိုင်ငံခြားပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီသည် Webster University Thailand Campus (WUTC) ၏ ပူးပေါင်း ကူညီမှုဖြင့် Webster Education Tour Package Program တစ်ခုကို 2011 March လမှစတင်၍ အမေရိကန်ပညာရေးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံလေ့လာရေး ခရီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ် (Non Profit - အကျိုးအမြတ်မရှိ) စနစ်ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်ုး......
စင်္ကာပူ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် National University of Singapore (NUS) ၏ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ လျှောက်ထားနိုင်
စင်္ကာပူ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် National University of Singapore (NUS) ၏ Institute of System Analysis တွင် ၂၀၁၁ သြဂုတ်လ Intake အတွက် Graduate Diploma in System Analysis ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာကို တက်ရောက်လိုသူများ၏ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက် စစ်ဆေး ပေးမည်ဟု......
University of Wales မှ ချီးမြှင့်သည့် BA (Hons) နောက်ဆုံးနှစ် သင်ယူနိုင် STI Education သည် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာနှင့် အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာဘာသာရပ်အမျိုးမျိုး သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိသည်။ ယခုအခါ STI မှ အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ အောင်မြင်ပြီးစီးသူများအနေနှင့် Wales တက္ကသိုလ်၏ BA (Hons) in Business ၏ နောက်ဆုံးနှစ်ကို သင်ယူနိုင်ပြီ်...
STUDY ABROAD (၂) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျောင်းအပ်မည့် ကျောင်းသားများကို Air Ticket Free ပေးမည်
STUDY ABROAD Information Centre ၏ (2) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် Singapore နိုင်ငံရှိ SIM, CURTIN, PSB, MDIS, ERC, Auston ကျောင်းများသို့ အနီးဆုံးကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင် သွားရောက်ကျောင်းတက်ကြမည့်...
Auston ကျောင်း၏ April Intake အထူးအစီအစဉ်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ BE, AGTI , City & Guilds အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများ အနေဖြင့် Coventry University ,UK ရဲ့ အသိအမှတ်ပြု အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ၊ မဟာဘွဲ့များကို အချိန်တိုအတွင်းအမြန်ဆုံး ရယူနိုင်မည့်အခွင့်အရေးထူးများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး Auston Institute မှ Country Manager ကိုယ်တိုင်လာရောက်မည်ဟောပြောမည် ဖြစ်ကြောင်း...
ERC Institute ၏ ပညာရေးထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသာ ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာတွင် အစစအရာရာတိုင်း မိမိကဦးစွာခြေလှမ်းနိုင်မှ သာလျှင် အောင်မြင်မှုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် စီးပွားရေးလုပ်လိုသူများ ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်လိုသူများ...
အင်္ဂလန်နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နှင့် မဟာဘွဲ့ကို အချိန်တိုအတွင်းရယူနိုင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ BE, AGTI , City & Guilds အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများ အနေဖြင့် Coventry University ,UK ရဲ့ အသိအမှတ်ပြု အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ၊ မဟာဘွဲ့များကို အချိန်တိုအတွင်းအမြန်ဆုံး ရယူနိုင်မည့်အခွင့်အရေးထူးရှိကြောင်း...
UK ရှိ University of Plymouth တွင် Hospitality & Tourism ဘာသာရပ်ကို IELTS 5.5 ဖြင့် တက်ရောက်နိုင် UK နိုင်ငံ၏ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် University of Plymouth သည် UK နိုင်ငံ၏ (၅) ခုမြောက် အကြီးဆုံး University တစ်ခုလည်းဖြစ်....
ဆန်းဒါးလန်းကောလိပ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၅) ဖွင့်မည် UK ၏ Highly Trusted College တစ်ခုဖြစ်သည့် City of Sunderland College ၏ အသိအမှတ်ပြု ကျောင်းခွဲဖြစ်သော Noble Nine College က ယင်းကောလိပ်၏ Diploma in Business (Marketing, Management, Administration) ဘာသာရပ်များကို UK ရှိ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များအားလုံးတွင် တပြေးညီတည်းသင်ကြားပို့ချ....
?၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် အခိုင်မာဆုံးကျောင်းများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း လေ့လာနိုင်မည့် Singapore Education Road Show 2011 ကျင်းပမည်? စင်္ကာပူနိုင်ရှိ Edu Trust လက်မှတ်ရကျောင်းများနှင့် CROWN Education တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်မှု့ဖြင့်၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် စင်္ကာပူပညာရေး အချက်အလက်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် လေ့လာနိုင်မည့်၊ Singapore Education Road Show 2011 ကို ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၁) ရက် သောကြာနေ့ ၊ နံနက် (၁၀)နာရီမှာ ညနေ(၄) နာရီအထိ အလုံလမ်းရှိ၊ Summit Parkview Hotel ကျင်းပ....
စီးပွားရေးဒီပလိုမာသင်ယူရင်း ပညာရေးလုပ်ငန်းအကြောင်း အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကိုပေးသော ERC INSTITUTE စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ERC INSTITUTE တွင် စီးပွားရေးဒီပလိုမာသင်ယူရင်း ပညာရေးလုပ်ငန်းအကြောင်း အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကောင်း တစ်ခုရှိကြောင်း....
စင်္ကာပူတွင် အလုပ်ရှာရင်းကျောင်းတက်လိုသော အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများ အတွက် ME နှင့် MBA သင်တန်းများ
နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ ၊ နည်းပညာကောလိပ်များမှအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နှင့် နည်းပညာဘွဲ့ရများ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျောင်းတက်အလုပ်ရှာလိုပါက TIPTOP: International Education Service Provider မှကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်....
Australia, UK တို့မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဘွဲ့(Bachelor of Business in International Business) နှင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး ဘွဲ့လွန် (Master of Business Administration in International Business) များ
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများတွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်များအား စိတ်ပါဝင်စားသူများ ၊ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအား လေ့လာလိုသူများ ၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများ အတွက် Australia နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော James Cook University မှ ပေးအပ် ချီးမြှင့်သော Bachelor of Business in International Business အား JUC ၏ Campus တစ်ခုဖြစ်သော Singapore Campus တွင် တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း....
အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုဒီပလိုမာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်လာနိုင်သော အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် စင်္ကာပူနိုင်ငံ ERC Institute မှ Diploma in Enterprise Development (Real Estate) ကိုမကြာခင် ဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း....
Bachelor Of Applied Management Studies အတွက် ၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ Institute တစ်ခုဖြစ်သော Nanyang Institute Of Management တွင် University of Ballarat မှ ချီးမြှင့်သော Bachelor of Applied Management Studies Course အားတက်ရောက်နိုင်ကြောင်း....
UK ရှိ LANCASTER UNIVERSITY မှ ချီးမြှင့်သော IT ဘွဲ့ကိုရယူနိုင်ပြီ
UK ရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သော LANCASTER UNIVERSITY မှ ချီးမြှင့်သည့် BSc (Hons) Information Systems / Information Technology နှင့် MSc in Computer Science (by research) ဘွဲ့များကို မလေးရှားနိုင်ငံရှိ SUNWAY UNIVERSITY တွင် တက်ရောက်သင်ကြား နိုင်ကြောင်း....
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များ၊ ပိုလီကျောင်းများနှင့် အစိုးရကျောင်းများ ကျောင်းလခမြင့်တက်
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များ၊ ပိုလီကျောင်းများနှင့် အစိုးရကျောင်းများ ကျောင်းလခ အသီးသီးမြင့်တက်သွားကြောင်း ပြည်တွင်းပညာရေး အေဂျင်စီ အချို့မှ သိရသည်။ ယခုကဲ့သို့ ကျောင်းလခများ မြှင့်တက်ရာတွင် Undergraduate Course များတွင် ၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အခြား Course များတွင် ၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း....
သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာပါက သြစတြေးလျဗီဇာ လျှောက်ထားရန် လွယ်ကူဟုဆို သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြမည့် မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါက သြစတြေးလျဗီဇာ လျှောက်ထားရန် လွယ်ကူကြောင်း....
British နှင့် US ပညာသင်စနစ်ခွဲခြားသိရန်လို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် မန်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင် ပြည်ပကျောင်း အကျိုးတော်ဆောင်တစ်ဦးက နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာသင်သွားလိုသူ လူငယ်များအနေဖြင့် စံပညာရေးသင်ကြားမှုစနစ် ၂ ခုဖြစ်သော ဗြိတိသျှနှင့် အမေရိကန် ပညာသင်ကြားမှုစနစ်နှစ်ခုအား အကြမ်းဖျင်းမျှ သိထားရန်လိုအပ်ကြောင်း....
Singapore Auston Institute တွင် ကျောင်းတက်မည့်ကျောင်းသားများအတွက် အထူးအစီအစဉ်
Singapore နိုင်ငံရှိ Auston Institute မှ April Intake တွင် တက်ရောက်ကြမည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Application Fee ကို အထူး အစီအစဉ်အနေဖြင့် စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ SGD 267.50 ဖြင့်သာ လက်ခံပေးမည် ဖြစ်သည်။ ပုံမှန် Application Fee မှာ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ SGD 481.50 ဖြစ်ပြီး April Intake အတွက် သီးသန့် စီစဉ်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး Feb 25 ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း....
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Raffles International College မှ မြန်မာကျောင်းသားများကို Study Grant ပေးမည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ Raffles International College တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၌ ဖွင့်လှစ်မည့်တန်းခွဲသစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား Study Grant ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Informatics Academy မှ 2011 အတွက် Study Grant များပေးအပ်လျှက်ရှိ Edu-trust (4) နှစ်သက်တမ်းပေးအပ်ခြင်းခံထားရသည့် Informatics Academy မှ ကျောင်းသားများအတွက် အထူးအခွင့်အရေးအနေဖြင့် study grant များပေးအပ်လျှက်ရှိကြောင်း.....
ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများအကြောင်း လန်ဒန်ဟိုတယ်ကျောင်းမှ ဟောပြော
နိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုကြိုးစားရှာဖွေနေကြသော လူငယ်များအတွက် အထူးရည်ရွယ်ပြီး Star Resources ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်းမှ ကြီးမှုးကျင်းပပြီး လန်ဒန်ဟိုတယ်ကျောင်းမှ ဟောပြောပွဲတစ်ခုကို ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့.....
စင်္ကာပူပညာရေး ၀န်ကြီး ဌာန၏ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးနှင့် Future Leader Scholarship ကို Singapore Education Road Show 2011 တွင်လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်
Interior Design, Fashion Design, Film, Music နှင့် Video Animation ဘာသာရပ်များအတွက် စင်္ကာပူပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး နှင့် Future Leader Scholarship ကို Singapore Education Road Show 2011 တွင်လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်မည်ဟုသိရ.....
စင်ကာပူ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်နိုင်
စင်ကာပူနိုင်ငံ Edu Trust လက်မှတ်ရ Management Development Institute of Singapore (MDIS) ကျောင်းက သည်ကနိုင်ငံတကာ ပညာရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက်သည်မှာ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မယ်လို့ သိရ.....
ပါ့စ်ဝေး ကောလိပ်သူနာပြုဒီပလိုမာ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲရှိမည်
စင်ကာပူနိုင်ငံပါ့စ်ဝေးကောလိပ်သူနာပြု ဒီပလိုမာသင်တန်းဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကို အခုလ ၁၉၊ ၂၀ ရက်နေ့တွမှာ ပြုလုပ်.....
စင်ကာပူကျောင်း မတက်ခင်သေချာလေ့လာပါ စင်ကာပူနိုင်ငံပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာတစ်နှစ်တက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦး ကျောင်းဆက်မတက်ချင်တော့လို့ တခြားကျောင်းကို ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါ တက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းက ကျောင်းလခတစ်ဝက်ကို လျော်ကြေးအဖြစ်ပြန်တောင်းခံရရှိတယ်လို့ သိရ.....
၂၀၁၁ တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ Social / Visit Pass ကို ထပ်မံတိုးပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းသိရ
ယခုနှစ်တွင် ၂ဝ၁၁ မှစ၍ Tourism Entering အတွက် Malaysia နိုင်ငံ၏ Social / Visit Pass ကိုထပ်မံ တိုးပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း Myanmar Search International Education Consultancy Co.,Ltd ၏ Managing Director ဒေါ်စုစုလှိုင်ထံမှသိရှိရ.....
မလေးရှားနိုင်ငံ MEPC မှ ပညာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်စင်တာဖွင့်မည် မလေးရှားနိုင်ငံ MEPC (Malaysia Education Promotion Centre) မှ Education Malaysia Information & Resource Centre ကို ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်း ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
Nanyang Technology University ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ စတင်လျှောက်ထားနိုင်
စင်ကာပူနိုင်ငံ Nanyang Technology University မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွက် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း.....
?PSB Academy မှ သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်မှ ချီးမြင့်မည့်ဘွဲ့များအကြောင်း နှင့် သြစတြေးလျပညာရေးစနစ်အကြောင်း Singapore Education Road Show 2011 တွင်ပါဝင်ပြသမည်?
သြစတြေးလျဘွဲ့များကိုလေ့လာ သင်ယူရရှိနိုင်မည့် PSB Academy သည် စင်္ကာပူအစိုးရမှ အသစ်ပြဒါန်းထားသည့် ပညာရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု့ အသွေးဆိုင်ရာလက်မှတ် EduTrust (၄) နှစ် ရရှိထားပြီး၊ သြစတြေလျပညာရေးစနစ်များနှင့် စင်္ကာပူမှ တဆင့် တက်ရောက်သင်ယူနိုင်မည့် သြစတြေးလျဘွဲ့များအကြောင်း.....
SP Jain Centre of Management မှ BBA, GMBA ဘာသာရပ်များအတွက် ပညာသင်ဆုပေးအပ်မည်
SP Jain Centre of Management ၏ ဒူဘိုင်း၊ စင်ကာပူနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံများရှိ ကျောင်းခွဲများတွင် တက်ရောက်နိုင်သည့် Bachelor of Business Administration (BBA), Global Masters in Business Administration (GMBA) ဘာသာရပ်များကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ ပညာအရည်အချင်းအပေါ် မူတည်ပြီး ပညာသင်ဆုများ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ဗြိတြိသျှ အစိုးရ ထောက်ပံ့ခံ The University of Greenwich မှ ချီးမြှင့်သော Diploma in Digital Game Design ကို ERC Institute တွင်တက်ရောက်နိုင်
စင်္ကာပူ ERC Institute တွင် Diploma In Digital Game Design ကို တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများ တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း.....
2011 တွင် Malaysia နိုင်ငံ၏ Social / Visit Pass ကိုထပ်မံတိုးပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း
ယခုနှစ် (2011) မှစ၍ Tourists Entering အတွက် Malaysia နိုင်ငံ၏ Social / Visit Pass ကိုထပ်မံတိုးပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း Myanmar Search International Education Consultancy Co., Ltd ၏ Managing Director ဒေါ်စုစုလှိုင်ထံမှသိရှိရ.....
ဥရောပဘဏ်များတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းလွယ်ကူသော MBA/M.Sc (Islamic Banking and Finance) ဘာသာရပ်ကို London School Of Business and Finance တွင်တက်ရောက်နိုင်
ဘဏ်လုပ်ငန်းများတွင် တနေ့တခြားရေပန်းစားလျက်ရှိသော အာရပ်နိုင်ငံများနှင့် ၄င်းတို့နှင့် လုပ်ငန်းဆက်နွယ်နေသော ဥရောပနိုင်ငံတို့တွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းလွယ်ကူသော Islamic Banking and Finance ဘာသာရပ်ကို မဟာသိပံဘွဲ့နှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့အနေဖြင့် LSBF တွင် တက်ရောက်ရယူနိုင်ကြောင်း .....
စင်္ကာပူ MDIS ကျောင်း Edu Trust လက်မှတ်ရရှိ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် သက်တမ်းရှည်ကြာသော ကျောင်းများထဲတွင် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်သည့် Management Development Institute of Singapore (MDIS) သည် ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုထက်တိုင် ကြီးမားကျယ်ဝန်းသော Campus အတွင်း၌ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ ပျော်ရွှင်စွာ ပညာသင်ကြားလျှက်ရှိ.....
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဆေးပညာမဟာဘွဲ့ ကို သင်ကြားပေးမည့် UCSI University မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆရာဝန်ဘွဲ့ရထားသူများအနေဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ UCSI University တွင် Master in Anti-ageing, Aesthetics and Regenerative Medicine ဘွဲ့အတွက် တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ကြောင်း.....
Kaplan Academy ကျောင်းဝင်ခွင့် အင်္ဂလိပ်စာ OESC တာဝန်ယူစစ်ဆေးမည်
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Kaplan Higher Education Academy (KHEA) မှ Diploma Program များတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် IELTS အမှတ်မရှိပါက Oversea Education Services Centre (OESC) က တာဝန်ယူ၍ Kaplan English Placement Test ကိုစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
သြစတြေးလျ စီးပွားစွန့်ဦးတီထွင်သိပ္ပံ Enterprise Development ဒီပလိုမာ စင်ကာပူတွင် တက်ရောက်နိုင် သြစတြေးလျအခြေစိုက် စီးပွားစွန့်ဦးတီထွင်မှုသိပ္ပံက ချီးမြှင့်သည့် Diploma in Enterprise Development သင်တန်းကို စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Entrepreneurship & Business Academy (ERC Institute) တွင် တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း.....
အင်္ဂလန်- London School of Commerce မှ ပေးအပ်မည့် ပညာသင်ဆု မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စတင်လျှောက်ထားနိုင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ London School of Commerce ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ အချက်အခြာကြတဲ့ နေရာမှာ တည်ရှိပြီး၊ Highly Trusted ကျောင်း တစ်ကျောင်း ဖြစ်ကာ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများကို ပညာသင်ထောက်ပံ့ ကြေးများ ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်လို့ သတ်မှတ်ချက် အရည် အချင်းပြည့်မှီသူများ CROWN Education မှာ စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီလို့ သိရ.....
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ အထူးချွန်ဆုံးဆုကို Limkokwing University of Creative Technology မှ ရရှိခဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Limkokwing University of Creative Technology မှ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာအထူးချွန်ဆုံးဆုကို ရရှိခဲ့ကြောင်း.....
စင်ကာပူနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ဝက်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုတွင် လေ့လာနိုင်
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ဝက်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုတွင် လေ့လာနိုင်ကြောင်း.....
မြန်မာနိုင်ငံမှ LCCI (3) ဒီပလိုမာ၊ CAT, ACCA Level 1 တစ်ခုခု ပြီးဆုံးထားသူများ၊ ဒီဂရီသို့ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်နိုင်တော့မည် မြန်မာနိုင်ငံမှ LCCI (3) ဒီပလိုမာ၊ CAT, ACCA Level 1 တစ်ခုခု ပြီးဆုံးထားသူများ၊ Kaplan Higher Education Academy စင်္ကာပူမှာ တစ်နှစ်သာ တက်ရောက်ရန်လိုအပ်.....
အမေရိကန်မှာ လက်တွေ့လေးပတ်သင်ရမယ့် အစီအစဉ် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့အတူ လျှောက်ထားနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံက ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူတွေအနေနဲ့ အက်ဖ်အမ် ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်တာ၊ တီဗီပရိုဂရမ်တွေ ထုတ်လုပ်တာ၊ အီလက်ထရွန်းနစ် မီဒီယာ၊ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ စတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွေ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံ အိုကလာဟိုးမားစီးတီးတက္ကသိုလ် (Oklahhoma City University) က ပေးအပ်တဲ့ Bachelor of Arts (Mass Communication) ကို စတင် လျှောက်နိုင်ပြီဖြစ်.....
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတကာ ပညာရေးနယ်ပယ်ကို ဥရောပ ကျောင်းတချို့ဆက်သွယ်လာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတကာ ပညာရေး နယ်ပယ်ကို ဥရောပ နိုင်ငံတွေက ကျောင်းတချို့ ဆက်သွယ်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟန်ဂေရီ၊ ကနေဒါ၊ ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံက ကျောင်းတချို့က သူတို့ကျောင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေ တက်ရောက်နိုင်.....
ယူကေမှာ ကျောင်းပြီး နှစ်နှစ်ဆက်နေနိုင်တဲ့ ဗီဇာပြန်စိစစ်နေ အင်္ဂလန်မှာ ကျောင်းပြီးတဲ့အခါ နှစ်နှစ် အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ post study work (psw tier 1) ဗီဇာကို ပြန်စိစစ်တော့မယ်လို့ UK Border Agency ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရ.....
အီးဂျေယူစာမေးပွဲ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဖြေဆိုသူလျော့လာ
သည်နိုဝင်ဘာမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဂျပန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ (EJU) ကို ဖြေဆိုသူ ၁၃ ယောက်သာရှိခဲ့ပြီး ဖြေဆိုသူက တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် တဖြည်းဖြည်း နည်းလာတာတွေ့ရ.....
အင်္ဂလန် အင်္ဂလိပ်စာသီးသန့်အတွက် ဗီဇာအမျိုးအစားသစ်ထုတ်ပြန်
အင်္ဂလန်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာစကားသီးသန့် သင်ယူလိုသူတွေအတွက် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီကစပြီး Extended Student Visitor Visa အမျိုးအစားအသစ် လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ UK Border Agency က ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရ သိရ.....
သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်ရရန် Foundation Program ကိုတက်ရောက်နိုင်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်ရန်အတွက် Foundation Program ကို James Cook University (S?pore) တွင် တက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း.....
နီအန်းပိုလီမှ ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ စတင်ခေါ်ယူ
စင်ကာပူနိုင်ငံ Ngee Ann Polytechnics တွင် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ စတင်ခေါ်ယူဖြစ်ရာ ပညာသင်ကြားလိုသူ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအနေဖြင့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်အတွင်း စတင်လျှောက်ထား နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း.....
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ UK Boder Agency မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား သီးသန့်သင်ယူလိုသူများ ဗီဇာအမျိုးအစားသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ UK Boder Agency မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို သီးသန့်သင်ယူလိုသူ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အနေဖြင့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ စတင်ကာ ဗီဇာအမျိုးအစားသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း.....
Oklahoma City University မှ Mass Communication ဘွဲ့ကို ပညာသင်ဆုနှင့်အတူ လျှောက်ထားနိုင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများအနေဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ Oklahoma City University မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့် Bachelor of Arts (Mass Communication) ဘွဲ့ကို ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးနှင့်အတူ စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း.....
ကျယ်ပြန့်လာသော စင်္ကာပူပညာရေးစနစ်နှင့် လေ့လာနိုင်သော Website များ
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် Private University များနှင့် Government University များရှိရာ ယခုအခါ Government University အပြင် Private University များကိုလည်း တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်စားလာကြောင်း.....
နိုင်ငံတကာတွင် မူကြိုဆရာမလုပ်လိုသူများအတွက် Early Childhood Program နိုင်ငံတကာမူကြိုကျောင်းများတွင် မူကြိုဆရာမလုပ်လိုသူများအတွက် Early Childhood Program အား Edu-Trust လက်မှတ် ရရှိထားပြီးဖြစ်သော Nanyang Institute of Management တွင် တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း.....
Australia Academy of Hospitality Management မှ ပေးအပ်သော Dip in Hospitality Management တွက်ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော Dip in Hospitality Management ဘာသာရပ်အား Dimension International College တွင်တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်ကြောင်း...
1 Year Nursing Program တက်ရုံဖြင့် New Zealand တွင် PR ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး New Zealand နိုင်ငံ၏ University College of Learning (UCOL) Nursing School တွင် ၁ နှစ် အချိန်ပြည့် တက်ရောက်ရုံဖြင့် Bechelor of Nursing Degree နှင့် PR လျှောက်ထားခွင့်ရရှိမည့် Study Program ဖွင့်လှစ်ရန်...
UK မှ စီးပွားရေး ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာအတွက် (၁၀၀%) ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်မည် လာမည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် UK ရှိ The Association of Business Practitioners (ABP) မှချီးမြှင့်သော စီးပွားရေးဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာကို တက်ရောက်မည့်သူများထဲမှ ထူးချွန်ပြီး ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည် မြင့်မားသူများအား UWSB မှ ရာနှုန်းပြည့်ပညာသင်ဆု ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ကြောင်း...
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးဆုကို Limkokwing University of Creative Technology မှရရှိ
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Limkokwing University of Creative Technology သည် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို စရိတ် သက်သာစွာ သင်ကြားပေးနေသော တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Limkokwing University ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ Dr.Limkokwing သည် အာရှတိုက်၏ ပထမဆုံးသော Campus အဖြစ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့ရာ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး...
?University of Sunderland (UK) မှ Tourism Student များအတွက် Internship Program နှင့် Scholarship ချီးမြှင့်မည်? Sunderland University (UK) မှ Tourism Management ကိုစိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသားများအား Scholarship ချီးမြှင့်မည့် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း...
စင်ကာပူရှိ အစိုးရ Engineering ကျေားင်ဖြစ်သည့် BCA Academy ၏ ၂ဝ၁၁ ဧပြီကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို Future Way တွင် အခမဲ့ ထုတ်ယူနိုင် စင်ကာပူရှိအစိုးရ Engineering ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်သည့် BCA Academy ၏ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာများကို Future Way တွင် အခမဲ့လာရောက် ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း...
Curtin University မှ 2011 နှစ်ဆန်းတွင် Diploma of Commerce Course Program ဖွင့်လှစ်မည်
Curtin University ၏ Sydney Campus (Curtin Sydney)တွင် Diploma of Commerce Program အသစ်ကိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီး စတင်စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း...
Edu-Trust (၄) နှစ်သက်တမ်းရှိ Informatics Academy မှ January Intake အတွက်ကျောင်းအပ်စတင်ခေါ်ယူ
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိကပညာရေးကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်သောသတင်းများအရ Singapore နိုင်ငံရှိ Informatics Academy အား Edu-Trust (၄) နှစ် သက်တမ်းပေးအပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း...
၂ဝ၁၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် သြစတြေးလျနိုင်ငံ Queensland Institute of Business and Technology (QIBT) ၏ ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင် နိုင်ငံတကာပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော Navitas ၏ သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ Queensland Institute of Business and Technology (QIBT) မှ လာမည့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငံတကာကျောင်းသား (၁၆) ဦးအား ပညာသင်ဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း...
နိုင်ငံရပ်ခြားပညာတော်သင်သွားသူများ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများ၏ ပြဌာန်းချက်များကို ကြိုတင်လေ့လာသင့်ဟုဆို
နိုင်ငံရပ်ခြားပညာတော်သင်သွားရောက်မည့် လူငယ်များအနေဖြင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအသိပညာဗဟုသုတများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများအပြင် သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းများ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ကြိုတင်လေ့လာသင့်သလို ဥပဒေဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်အလက်များကိုလည်း သိရှိထားရန် လိုအပ်ကြောင်း...
50% SCHOLARSHIP အစီအစဉ် AUSTRALIA နိုင်ငံ၏ TOP RANK UNIVERSITY တစ်ခုဖြစ်သော GRAFFITH UNIVERSITY နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော QIBT မှ JULY INTAKE အတွက် 50% SCHOLARSHIP ပေးမည့် အစီအစဉ်ရှိ...
UK တွင် Health and Social Care တက်ရောက်နိုင်
UK နိုင်ငံတွင် Health and Social Care ဘာသာရပ်ကို သွားရောက်လေ့လာရန် စိတ်ပါဝင်စားသည့် Medical Field အတွင်းမှ ကျောင်းသူ/ သားများ အနေဖြင့် ၎င်းဘာသာရပ်ကို UK နိုင်ငံရှိ Ealing, Hammersmith & West London College တွင် (၁၅)လကြာတက်ရောက်နိုင်ကြောင်း...
တရုတ်နိုင်ငံရှိ GEM Global College ၏ ၂ဝ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ Intake ကို လျှောက်ထားနိုင်
တရုတ်နိုင်ငံရှိ GEM Global College တွင် တက်ရောက်လိုသော မြန်မာကျောင်းသားများအနေဖြင့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ Intake အတွက် စတင်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
သြစတြေးလျလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှ Point System နှင့် Pass Mark အသစ်ထုတ်ပြန်
သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေမည့်သူများအတွက် သြစတြေးလျလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရးမှ Point System နှင့် Pass Mark များကို အသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း....
နိုင်ငံတကာတွင်သွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသူများ မလေးရှားနိုင်ငံကို ရွေးချယ်မှုပိုများလာ
နိုင်ငံတကာတွင်သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြမည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသား/ သူများနှင့်ကျောင်းသားမိဘများမှာ မလေးရှားနိုင်ငံကို ရွေးချယ်မှု ပိုများလာကြောင်း....
စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့သွားရောက်ပညာသင်ကြားသူများ Private University များကို ရွေးချယ်မှုများလာ
စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားသည့်ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် Private University များကိုရွေးချယ်မှုများလာကြောင်းသိရသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း၌ အစိုးရကျောင်းများကိုရွေးချယ်တဲ့သူတွေ ရှိသလို Private ကျောင်းတွေကိုလည်းရွေးချယ်ကြပြီး ယခုနှစ်များတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် Permanent Resident (PR) ရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများနည်းပါးခြင်းကြောင့် Government University များကိုတက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲ Quality ရှိတဲ့ Private University များကိုတက်ရောက်ကြကြောင်း....
စင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ် (NUS) မှပေးအပ်သော ဗိသုကာပညာရပ်ကို မဟာတန်းတက်ရောက်ရန် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီ
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဖြစ်သော National University of Singapore (NUS) တွင် ဗိသုကာပညာရပ်ဆိုင်ရာ မဟာတန်း Master of Architecture ကိုစတင်တက်ရောက်ရန်အတွက် လျှောက်လွှာများစတင်လက်ခံနေပြီလို့သိရ....
သြစတြေးလျမှာ ပညာသင်မယ့်ကျောင်းသားများကို Biometric Check စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်ီ သြစတြေးလျမှာ ပညာသင်မဲ့နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေကို Biometric Check စမ်းသပ်ပြုလုပ်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကလည်းဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်မျိုးတွေကိုကြိုတင်တားဆီးဖို့လို့သိရပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်ကြောင့် သြစတြေးလှပညာရေးအပေါ် အဆိုးမြင်သွားကြမလားဆိုပြီး တစ်ချို့ကလည်း စိုးရိမ်ကြ....
Australia ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီ Australia နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု University များတွင် သွားရောက်တက်ရောက်လိုသော မြန်မာကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် Australia နိုင်ငံ၏ Top Ranked University တစ်ခုဖြစ်သော Griffth University မှ တာဝန်ခံကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ ညနေ ၄နာင်္ရီမှ ၆ နာရီ အချိန်အထိ STUDY ABROAD Information Centre တွင်ကျောင်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ မိမိဝါသနာပါသည့်ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်းသိကောင်းစရာ အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပပြုလုပ် ပေးမည်ဖြစ်.....
Kaplan တွင် Diploma ပြီးပါက ဒီဂရီကို ၁ နှစ်ဖြင့်ရယူနိုင်
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Kaplan Higher Education ကျောင်းတွင် Diploma ၁၀ လ တက်ရောက်သင်ယူပြီးပါက သင်တန်းကာလ ၁ နှစ်ကျော်သာ ကြာမြင့်မည်။ Bachelor တန်းသို့ တက်ရောက်သင်ယူပြီး ဘွဲ့ဒီဂရီ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
Assumption University (Thailand)၏ January Intake အတွက်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း
Assumption University သည် ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Bangkok တွင်ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသား ၂၀၀၀ ကျော်အနက်မှ မြန်မာကျောင်းသား ၃၅၀ ကျော် ပညာဆည်းပူးလျှက်ရှိ.....
ပြည်တွင်းဘွဲ့ရများ UK တွင်အလုပ်လုပ်ရင်း ဟိုတယ်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်သင်ယူနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံမှ မည်သည့်ဘာသာရပ်နှင့်မဆို ဘွဲ့ရရှိထားသူများအနေဖြင့် UK တွင်အလုပ်လုပ်ရင်း Postgraduate Diploma in Hospitality Management နှင့် Postgraduate Diploma in Hotel and Leadership Management ဘွဲ့များကိုသင်ယူရရှိနိုင်ကြောင်း.....
နိုင်ငံတကာပညာရေးတွင် ဘာသာရပ်ကင်းလွတ်ခွင့်များကို ကျောင်းသားများပိုစိတ်ဝင်စားလာ ပြည်ပတွင်ပညာသင်ကြားလိုသောကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအများစုမှာ ၎င်းတို့ တက်ရောက်မည့် တက္ကသိုလ်များတွင် ဘာသာရပ်ကင်းလွတ်ခွင့် များရရှိရန် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြကြောင်း.....
EHWLC AIR CABIN CREW နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းများတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသော မြန်မာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် UK နိုင်ငံတွင် International Air Cabin Crew Course ကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် သွားရောက်သင်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း .....
University of Wales မှ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဘွဲ့လွန်သင်တန်း စင်ကာပူတွင်သင်နိုင်
မြန်မာနိုင်ငံမှ MBBS ဘွဲ့ရများနှင့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ဘွဲ့ရများ၊ တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိထားသူများအနေဖြင့် Univeristy of Wales မှ ချီးမြှင့်မည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းကို စင်ကာပူနိုင်ငံ MDIS တွင်တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း.....
UK ရှိ LSBM တွင်နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုဘာသာရပ်များတက်ရောက်သင်ကြားနိုင် UK ရှိ LSBM (London School of Business Management) တွင် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဘာသာရပ်များ တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း .....
ASEANpreneurs Youth Leaders Exchange လူငယ်များစတင်လျှောက်ထားနိုင်
စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် အာဆီယံစွန့်ဦးတီထွင်မှုဆိုင်ရာ လူငယ်အဖွဲအစည်း AYLE မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဖလှယ်ရေးအစီအစဉ် ၂ဝ၁ဝ အတွက် မြန်မာလူငယ်များစတင်လျှောက်ထားနိုင်.....
ပိုလီကျောင်းတက်သူ ၇၅ဝဝဝ ကျော် နောက် ၃ နှစ်၌ Resort တွင်အလုပ်သင်ဆင်းခွင့်ရရှိနိုင်
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ပိုလီကျောင်း ၅ ကျောင်းတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ယူသူ ၇၅ဝဝဝ ကျော်သည် လာမည့် ၃ နှစ်တွင် Resorts world Sentosa တွင်မိမိတို့ ရယူထားသည့် ဘာသာရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်များ၌ လက်တွေ့အလုပ်သင်ဆင်းခွင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
KDU University College ၏ ဇန်န၀ါရီတန်းခွဲအတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့်များစတင်လျှောက်ထားနိုင်
KDU University College မှ (၂၀၁၁) ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတန်းခွဲအတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့်များ စတင်လက်ခံနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများထဲမှ IGCSE နှင့် GCE 'A' Level တွင် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ထားသူများအား ပညာသင်ဆုများ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီး အခြေခံပညာအထက်တန်း အောင